Dopamine D1 D5 Receptors များသည် Hippocampal ကာလရှည်ပလပ်စတစ်ဖြစ်မှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဆိုင်သောအလေးထားမှုကိုစေ့စေ့စစ်ဆေးသည်။
Persistent Hippocampal Long Term ပလပ်စတစ် (1) ကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုလုပ် Dopamine D5 D2014 receptor ဖျန်ဖြေပြန်ကြားရေး Saliency
Cereb Cortex ။ 2014 ဧပြီ; 24 (4): 845-858 ။
2012 နိုဝင်ဘာ 25 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1093 / cercor / bhs362
Niels Hansen နှင့် Denise Manahan-Vaughan
Dopamine (DA) သိမှတ်ခံစားမှု၏ပေးရန်အတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ ဒါဟာဖြစ်ပေါ်သောအမှတ်တရများမှ salience ဆွေးနွေး, တွေ့ကြုံခံစား-မှီခိုဖို့သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုအရောင်ကထပ်ပြောသည်။ အဆိုပါ Synaptic အဆင့်မှာ, အတွေ့အကြုံ-မှီခိုသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှု Synaptic plasticity အားဖြင့် enabled နှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၎င်း၏အရေးပါပုံကိုပေးထားပါက DA ရှည်ကာလအဘို့အဆက်ရှိနေသေးကြောင်း Synaptic plasticity ၏ပေးရန်၌၎င်း, အထူးသဖြင့် plasticity ၏အဓိက neuromodulator ပါဝင်သည်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်မှ analog: အချိန်။ အဆိုပါ hippocampus, ထိုအထူး D1 / D5 အဲဒီ receptor hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ်များအတွက်အလွန်အရေးပါသက်သေနှင့်အတူ, DA ကြောင့်ထိခိုက်နေသည်, semantic Episode, Spatial နှင့် declarative ဟူ. အမှတ်တရများ၏ Synaptic အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အရေးပါသောဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပွငျ D1 / D5 receptors အဆိုပါ hippocampus အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ခံရသတင်းအချက်အလက်မှအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏ဂုဏ်သတ္တိများဆွေးနွေးအတွက်အဓိကဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအစ Synaptic plasticity ၏ persistent ပုံစံများ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါနှစ်ဦးစလုံး Spatial ကိုယ်စားပြု၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ဝှက်ကြောင်းအစီရင်ခံစာများပေးထား, ဒီ D1 / D5 receptors သဘောသဘာဝနှင့်သိုလှောင်ထားသောအချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးအကြောင်းအရာမောင်းနိုင်သောအကြံပြု အဆိုပါ hippocampus ၌တည်၏။ ယင်းတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌, ငါတို့ D1 / D5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည် plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ် receptors ကြောင်းအဆိုပြုနှင့် hippocampus အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ခံရသတင်းအချက်အလက်မှအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏ဂုဏ်သတ္တိများဆွေးနွေးအတွက်အဓိကဖြစ်ပါသည်။
keywords: သိမှတ်ခံစားမှု, hippocampus, သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်, ပြန်လည်သုံးသပ်, Synaptic plasticity
Dopamine (DA) (ပု catecholamines နှငျ့ဆိုငျသောဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွက် neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်Carlsson et al ။ 1962) ။ DA အာရုံခံသူတို့ရဲ့ innervation နယ်မြေများအပေါ်အခြေခံပြီး dopaminergic စနစ်များအတွက်ခွဲခြားထားပါသည်။ လေး axon dopaminergic လမ်းကြောင်းဖော်ပြထားကြသည်: 1) nigrostriatal, 2) mesolimbic, 3) mesocortical နှင့် 4) tuberoinfundibular (Vallone et al ။ 2000) ။ DA သိမှတ်ခံစားမှု-related ဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်အခန်းကဏ္ဍများစွာသောလူ subserves: ဒါဟာမှတ်ဉာဏ်, လှုံ့ဆျောမှု, ခံစားချက်, မော်တာလှုပ်ရှားမှုနှင့် neuroendocrine ပေါင်းစည်းမှုထိန်းညှိ (horn et al ။ 1979; Fluckiger et al ။ 1987) နှင့်ဝတ္ထုအပြီးဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ် (Ljungberg et al ။ 1992), အဓိကအာရုံခံ (Ungless 2004(), ဆန္ဒရှိBromberg-မာတင် et al ။ 2010), သို့မဟုတ်အားဖြည့်-သက်ဆိုင်ရာ (ဆုလာဘ်) လှုံ့ဆော်မှု (Schultz et al ။ 1993) ။ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်စွာကတည်းကသိမြင်မှုဆိုင်ရာရောဂါများနှင့် ဦး နှောက်ရောဂါများတွင်၎င်း၏အခန်းကဏ္studiedကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ပါကင်ဆန်ရောဂါဝေဒနာသည်များ၏အခြေခံလူတန်းစားများတွင် DA သိသိသာသာနိမ့်သောအာရုံစူးစိုက်မှုဖြစ်ပေါ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိချက်များမှတွေ့ရှိရသည်။Ehringer နှင့် Hornykiewicz 1960) နှင့် DA အလုပ်မဖြစ် (ထိုကဲ့သို့သော schizophrenia အဖြစ်သိမြင်မှုမမှန်အထောက်အကူပြုကြောင်းgoto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2007; Lodge နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2011), မူးယစ်ဆေးစွဲ (Robinson နဲ့ Berridge 1993), အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ (del Campos et al ။ 2011) နှင့်ဖြစ်နိုင်သည်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (Kumar ကနှင့် Patel က 2007; Jürgensen et al ။ 2011).
စမ်းသပ်သက်သေအထောက်အထား (DA အဆိုပါ hippocampus-မှီခို Synaptic plasticity ၏မော်ဂျူနှင့်မှတ်ဉာဏ်အဘို့အမြင့်မားသက်ဆိုင်ရာကြောင်းအကြံပြုဂျေး 2003; Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005; Lisman et al ။ 2011) ။ အဆိုပါ D2 / D1 (D5-လိုမျိုး) receptors နှင့် D1 ကဲ့သို့ receptors (: ဤသက်ရောက်မှု DA receptors ၏2ကွဲပြားအုပ်စုများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်Tiberi et al ။ 1991; Vallone et al ။ 2000; Beaulieu နှင့် Gainetdinov 2011) (သဖန်းသီး။ 1), မထွက်ရ, မကြာသေးမီဆယ်စုနှစ်ထဲမှာ, D1 / D5 receptors တိုးမြှင့်အာရုံစိုက်မှုခံရကြပြီ။ ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ဦးစလုံး hippocampus-မှီခို Synaptic plasticity (ထိုယန္တယားသင်ယူမှုအခြေခံယုံကြည်) နှင့် hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ် (၏စည်းမျဉ်းတွင်ကစားသောသိသိသာသာအခန်းကဏ္ဍသည်Huang ကနှင့် Kandel 1995; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006; Bethus et al ။ 2010; Clausen et al ။ 2011; da Silva et al ။ 2012) ။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်မှာ D1 / D5 receptors များသည်ပုံစံ ၂ ခုစလုံး (> 24 h) synaptic plasticity ကိုထိန်းညှိပေးပြီးသတင်းအချက်အလက်များကိုဝတ္ထုသို့မဟုတ်အဓိကကျသည့်အချက်များအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်အရေးကြီးသည်။Davis က et al ။ 2004; Ungless 2004; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006, 2011), အလှည့်အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန် hippocampus-မှီခိုမှတ်ဉာဏ် encoding ကနှင့် retention ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးရာ (Adcock et al ။ 2006) ။ အဆိုပါ D2 ကဲ့သို့ receptors ဆန့်ကျင်ဘက်အတွက်, (က Synaptic plasticity သို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အဆင့်ဆင့်မှာဖြစ်, hippocampus-မှီခိုသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လျော့နည်းသိသာထင်ရKulla နှင့် Manahan-Vaughan 2003; Xing et al ။ 2010) ။ D1 / D5 receptors ၏ activation (ထို hippocampus အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ပြောင်းလဲIto ကနှင့် Schumann 2007; Hamilton က et al ။ 2010) နှင့်ထို့ကြောင့် Synaptic plasticity သို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ် encoding က၏သော induction များအတွက်တံခါးခုံကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ ထိုကဲ့သို့သော dentate gyrus (DG), cornus ammonis 1 (CA1) အဖြစ်ကွဲပြားခြားနားသော hippocampal ငျဒသေမြားနှငျ့ hippocampus အတွင်းသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ် subiculum လည်း D1 / D5 receptors (များ၏ activation အားဖြင့် modulated နေကြတယ်Kulla နှင့် Manahan-Vaughan 2000; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006; Othmakhova နှင့် Lisman 1996; Roggenhofer et al ။ 2010).
D1 နှင့် D5 receptors ၏အချက်ပြကက်စကိတ်။ ဘုံ CREB activation (မီးခိုးရောင်သေတ္တာများ) တွင်အဆုံးသတ် D1 (အဝါရောင်သေတ္တာများ) နှင့် D5 receptors (အပြာသေတ္တာများ) ၏ကွဲပြားခြားနားသောမော်လီကျူးလမ်းကြောင်း၏သိထားသရုပ်ပြ။ အဆိုပါ D1 / D5 သည့်စနစ်အကြား Crosstalk အားဖြင့်ညွှန်ပြနေသည် ...
Synaptic ခွန်အား၌လုပ်ဆောင်ချက်-မှီခိုပွောငျးလဲဦးနှောက်ထဲမှာအသစ်ကသတင်းအချက်အလက်ဝှက်။ နှစ်ဦးကအဓိကပုံစံများကိုပုံမှန်ဖြစ်နိုင်သည် 1) ရေရှည်အလားအလာ (LTP; Bliss နှင့် Lomo 1973; Bliss နှင့် Collingridge 1993Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏) နှင့် 2) ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ (, LTD) (Dudek နှင့်ထမ်းရွက် 1992; Manahan-Vaughan 1997) ။ တစ်ခုတည်းကိုသာလျှပ်စစ် afferent ဆွ (လျှပ်စစ်သွေးဆောင် plasticity) ကသွေးဆောင်ကြောင်း LTP ပထမဦးဆုံးဖောက်ထားလမ်းကြောင်းကို၏ကြိမ်နှုန်းမြင့်ဆွ (HFS) (ပြီးနောက်ယုန်၏ DG အတွက် 40 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းအကြမ်းဖျင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်Bliss နှင့် Lomo 1973) ။ Hippocampal, LTD Schaffer ပေါင်ပစ္စည်း (SC) -CA1 synapses (အတွင်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အဖော်ပြထားခဲ့သည်Dunwiddie နှင့် Lynch 1978) နှင့်လျှပ်စစ်နိမ့်ကြိမ်နှုန်းဆွ (LFS အားဖြင့်သွေးဆောင်နေသည်: 1-3 မိဘို့ 5-15 Hz) ။ နှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ရပ် (hippocampal သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အခြေခံယုံကြည်နေကြသည်Bliss နှင့် Collingridge 1993; ဝက်ဝံ 1996; Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2007) ။ ဒါကဖြစ်နိုင်ခြေကိုသင်ယူမှု-facilitated plasticity အဖြစ်လူသိများနေတဲ့ဖြစ်ရပ်ဆန်းဖြေရှင်းရန်ပိုမိုမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုများကထောက်ခံသည်။ ဤတွင်ထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအောက်တွင် Basal Synaptic ခွန်အား၌အဘယ်သူမျှမပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်စေ elicits, ဒါမှမဟုတ်ကာလတို plasticity elicits တစ်ဝတ္ထုသင်ယူမှုအတွေ့အကြုံနှင့်အတူဒွန်တွဲပါလျှင် (persistent plasticity မှဦးဆောင်ကြောင်း, အားနည်းလျှပ်စစ် afferent ဆွManahan-Vaughan နှင့် Braunewell 1999; Goh ကနှင့် Manahan-Vaughan 2012).
သင်ယူမှု-facilitated plasticity ၏လေ့လာရေး LTP နှင့်, LTD တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်ကိုယ်စားပြုမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောဒြပ်စင်များ၏ encoding ကတာဝန်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် LTP (ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအာကာသ, Spatial ပြောင်းလဲမှု, ဒါမှမဟုတ် Contextual ကွောကျရှံ့ခွငျး၏ encoding ကသူနဲ့ဆက်စပ်နေသည်Straube et al ။ 2003; Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2004; Whitlock et al ။ 2006), LTD မှ (Spatial အခြေအနေတွင်၏ encoding ကသူနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်သော်လည်းManahan-Vaughan နှင့် Braunewell 1999; Etkin et al ။ 2006; Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2004, 2007, 2008a; Goh ကနှင့် Manahan-Vaughan 2012) ။ Spatial ကိုယ်စားပြုမှုမှ LTP နှင့်, LTD ၏တိကျသောပံ့ပိုးမှုများကိုတင်းကျပ်စွာ (သက်ဆိုင်ရာ hippocampal ငျဒသေဆက်စပ်နေကြသည်Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2008a; Hagena နှင့် Manahan- Vaughan 2011) ။ အဘယ်အရာကိုသပိတ်မှောက်သည်, သို့သော်, (D1 / D5 receptors နှစ်ဦးစလုံးမလြှော့ LTP ထိန်းညှိသောကွောငျ့ဖွစျသညျHuang ကနှင့် Kandel 1995; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) နှင့်ဇွဲ, LTD (သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006), ဤအ receptors မှတ်ဉာဏ်ကိုယ်စားပြုဖို့ Synaptic plasticity ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများအားဖြင့်လှူဒါန်းခဲ့သည်သတင်းအချက်အလက်များ၏ကြင်နာကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်ကြောင်းအကြံပြု။
LTP ပုံမှန်အားဖြင့်မှတဆင့်ကယ်လစီယမ် entry ကိုလိုအပ်သည်ရေတိုရေရှည်အလားအလာဥပမာအားဖြင့်,) 1 အဖြစ်ရည်ညွှန်းယာယီအမျိုးအစားခွဲခြားထားပြီး, NNMDA receptors နှင့် metabotropic အချိုမှု၏ activation (mGlu) receptors (နှစ်ဦးစလုံးလိုအပ် -methyl-D-aspartate (NMDA) receptors, 2) အစောပိုင်း (E) နဲ့ -LTPဘာရှား et al ။ 1993) နှင့်ပရိုတိန်း kinases (Malenka et al ။ 1989) နှင့်အငယျဆုံးသောအတိုင်းအတာ, phosphatases ခြင်းငှါ၎င်း, 3) အစောပိုင်းချက်ချင်းမျိုးဗီဇ (၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါအခွခေံကြောင်းနှောင်းပိုင်းက (L) -LTPဂျုံးစ် et al ။ 2001) ပရိုတိန်းဘာသာပြန်ချက်လိုအပ်တယ်, ပရိုတိန်းကူးယူလိုအပ်သည် (4) နှောင်းပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းတွင် (ll) -LTP (ငုယင် et al ။ 1994; Villers et al ။ 2010) နှင့် LTP စုစည်းပြီးနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ် (ရိုင်ယန် et al ။ 2012) ။ အလားတူ delineations, LTD အဘို့ထင်ရှားနေသောခေါင်းစဉ်: တစ်ခုကအစောပိုင်း, LTD NMDA receptors ၏ activation အပေါ် (E) နဲ့ -LTD မှီခို (အနည်းဆုံးအဆိုပါ CA1 ဒေသတွင်; Dudek နှင့်ထမ်းရွက် 1992; Manahan-Vaughan 1997), mGlu receptors (Manahan-Vaughan 1997) နှင့်ပရိုတိန်း phosphatases (Mulkey et al ။ 1993မျိုးဗီဇစကားရပ်အပေါ်မှီခိုကြောင်း), နှောင်းပိုင်းတွင်, LTD (L) -LTD (အာဗြဟံသည် et al ။ 1994) နှင့်ပရိုတိန်းဘာသာပြန်ချက် (Manahan-Vaughan et al ။ 2000; Parvez et al ။ 2010) နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ကူးယူလိုအပ်သည်နှောင်းပိုင်းတွင်နှောင်းပိုင်းတွင် (ll) -LTD (Kauderer နှင့် Kandel 2000) ။ လျှပ်စစ်သွေးဆောင်နှင့်၎င်းတို့၏နောက်ခံယန္တရားများအတွက်သင်ယူမှု-facilitated plasticity ရှယ်ယာတူညီ (ပေမယ့်Manahan-Vaughan 1997; Popkirov နှင့် Manahan-Vaughan 2011), သူတို့ကလည်းအတော်လေးကွဲပြားဂုဏ်သတ္တိများဖော်ပြရန်။ ဥပမာအားဖြင့်, facilitated-သင်ယူခြင်းနှင့်မလျှပ်စစ်သွေးဆောင်မြဲ plasticity beta ကို-adrenoreceptors (လိုအပ်Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2008b), နှင့် Madronal et al ။ (2009) တွဲ-သွေးခုန်နှုန်းပံ့ပိုးကွဲပြားခြားနားဂန္ eyeblink အေးစက် (ဆိုလိုသည်မှာသင်ယူမှု-facilitated plasticity) က evoked Synaptic ခွန်အား၌လျှပ်စစ်သွေးဆောင် LTP သို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှုများကိုအားဖြင့် modulated ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ဒါဟာယခုတင်ပြသော data တွေကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အရာ, သင်ယူမှု-facilitated plasticity neuromodulation ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံကြောင်းသို့သော်အတော်လေးဖြစ်နိုင်သောဖြစ်တယ်, တစ်ဦးတည်းလျှပ်စစ်ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း plasticity ထက်ပိုဇီဝကမ္မ။
အဆိုပါ hippocampus (ထိုကဲ့သို့သောစိုးရိမ်စိတ်အဖြစ်အများအပြားအပြုအမူတွေကိုအထောက်အကူပြုရန်အင်ဂျင်နှင့် Treit 2007), ဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူ (Pennartz et al ။ 2011), သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့, olfactorial ဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် Spatial အညွှန်းနှင့်တိမ်းညွတ် (Hölscher 2003) ။ သို့သော်အများဆုံးသိသိသာသာသည်ကွဲပြားခြားနားသော hippocampal ငျဒသေနေတဲ့မှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စ၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်များတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ယုံကြည်ကြသည်။ အဆိုပါ DG အလားတူသတင်းအချက်အလက်အတူတူပင်ဖြစ်ခြင်းကိုမအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုဖြစ်ပါတယ်ခွပုံစံကိုခွဲခြာအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ postulated ဖြစ်ပါတယ်သွားရမည်အကြောင်း, အ CA3 ဒေသပုံစံပြီးစီးများတွင်ပါဝင်နေသည်, ဝင်လာသောသတင်းအချက်အလက်တစ်ဦးသိမ်းဆည်းထားကိုယ်စားပြုမှု၏ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်ရယူခြင်းမှဦးဆောင်သိရပါအံ့, ထိုအချက်အလက်များကိုယခင်ကလှူဒါန်းခဲ့ကြသင့်တယ် တစ်ဦးမှတ်ဉာဏ်၏ဖန်ဆင်းခြင်း (Lee က et al ။ 2004; Goodrich-Hunsaker et al ။ 2008) ။ အဆိုပါ CA1 ဒေသအခြားငျဒသေကနေလာမယ့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေါင်းစပ်ယုံကြည်လည်းတိုက်ဆိုင်ထောက်လှမ်း (များတွင်ပါဝင်နေသည်Lismann နှင့် Otmakhova 2001) ။ အလုပ်သမားများ၏ဤဌာနခွဲပေးထားသောကြောင့် D1 / D5 receptors သည်ဤဖွဲ့စည်းပုံအတွက် Synaptic plasticity အပေါ်တစ်ဦး differential ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းဖြစ်ကောင်းဒါအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဤတွင်တစ်ခုကိုသို့သော် CA3 ဒေသတွင်ဤ receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကိုသေးဆန်းစစ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ရပါမည်။
အဆိုပါ Hippocampus အတွက် DA ဖြန့်ချိ
DA (ထို hippocampus အတွက်နေထိုင် axon ဆိပ်ကမ်းကနေဖြန့်ချိတာဖြစ်ပါတယ်Frey et al ။ 1990), အရာအဓိကရင်းမြစ်ပါဝင်သောယင်း ventral tegmental ဧရိယာ (VTA, ကြွက် nomenclature အတွက် A10 ဆဲလ်အုပ်စုကို) နဲ့ midbrain ရင်းမြစ်များမှအစပြု။ ဖြန့်ချိခြင်း (hippocampus အချို့မိနစ်အသစ်အဆန်းထိတွေ့ပြီးနောက် hippocampus ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်Ihalainen et al ။ 1999) ။ ဤသည် DA အဆိုပါ hippocampus အတွက်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏အပြောင်းအလဲနဲ့ဖွင့်အတွက်သော့ချက်အစိတ်အပိုင်းကြောင်းဆိုလို။ အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းသွင်းအားစုများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချနေစဉ်အတွင်း temporoammonic (TA) synapses ခုနှစ်, DA (High-အကြိမ်ရေသွင်းအားစုမှတုံ့ပြန်မှုကိုပိုကောင်းတဲ့ High-pass filter ကိုအဖြစ်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုကြိမ်နှုန်း (5-100 Hz) ၏အပိုင်းအခြားအတွင်းပြုမူIto ကနှင့် Schumann, 2007) ။ TA synapses မှာ LTP DA နေဖြင့်တိုးမြှင့်လျက်ရှိသည်သော်လည်းသိသိသာသာ, SC-CA1 synapses မှာ LTP, ထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် DA အလှည့်သတင်းအချက်အလက်အကြောင်းအရာနှင့်သတင်းအချက်အလက်များသိုလှောင်မှု၏သဘောသဘာဝပွောငျးလဲထားတဲ့ SC-CA1 synapses မှာ "ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း" လုပ်ငန်းများ၌ခံရသတင်းအချက်အလက်, နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက, hippocampus မှတိုက်ရိုက်က TA synapses မှတဆင့် entorhinal cortex ကနေလွန်ခံရအချက်အလက်များ၏ဆက်စပ်မှုတိုးပွါးကြောင်းအကြံပြု Synaptic အလေးအတွက်အပြောင်းအလဲ၏ညှနျကွားလွှမ်းမိုးသည်။ က hippocampus ပိတ်အဖြစ်ဤသည်ယခင်က encoded သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသစ်ကိုအချက်အလက်များ၏ပေါင်းစည်းမှု subserve လိမ့်မည်။
အဆိုပါ VTA အဆိုပါ hippocampus များအတွက် DA ၏တစ်ခုတည်းသောအရင်းအမြစ်မဟုတ်ပါဘူး။ လွဲလျှင်အခြားသော VTA မှစ. , hippocampus အဆိုပါ retrorubral ဧရိယာ A8 ကနေသွင်းအားစုအားလက်ခံတွေ့ဆုံနှင့် substantia nigra (compacta အ A9 ဆန်းစစ်မှုBeckstead et al ။ 1979) နှင့် NACC (ဥပမာနျူကလိယ accumbens ကဲ့သို့သောအခြား dopaminergic အရေးပါနှင့်အတူအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်; သင်္ဘောသဖန်းသီး2နှင့် and3) .3) ။ ဥပမာ, VTA ထံမှ prefrontal cortex (PFC) မှ mesocortical DA Project (hippocampus-PFC interaction ကအားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ပြောင်းလဲပစ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှဖြစ်နိုင်သည်Seaman et al ။ 1998; goto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2008a) ။ က hippocampus တိုက်ရိုက်ပရောဂျက်ပါဘူးပေမယ့်အပြင်,, (အတူတကွ ventral pallidum, VP နှင့်အတူ) ကို NACC (salience နှင့်ရည်မှန်းချက်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူအသစ်အဆန်း signal ကိုပေါင်းစပ်ကူညီရန်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည် hippocampal-VTA ကွင်းဆက်၏အောက်ဖက်လက်မောင်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005; သင်္ဘောသဖန်းသီး2နှင့် and3) .3) ။ limbic နှင့် cortical သွင်းအားစု gating အတွက်၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှထို့အပြင် NACC (ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတိုးတက်အောင်အတွက်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်Gruber et al ။ 2009) နှင့်သင်ယူခြင်းစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ရဖို့ hippocampal-မှီခို Spatial သတင်းအချက်အလက်များအားဖွင့်အတွက် (Ito ကနှင့် Hayen 2011) ။ အချက်အလက်ဆိုင်ရာမြို့တံခါးဝ၌ NACC ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြီးအသေးစိတျထဲမှာတခြားနေရာပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ပြီး (ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း et al ။ 2007; goto နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2008b; ယဉ် et al ။ 2008).
အဆိုပါ hippocampus နှင့် dopaminergic အရေးပါအကြားခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု။ အဆိုပါ VTA, retrorubral လယ်ပြင် (RRF), နှင့် LC အပေါငျးတို့သ hippocampus (HPC) အားပရိုဂျက်ပေးပို့ပါ။ အလှည့်စီမံကိန်းများတွင်, တဦးကိုလက်တွင်, VTA နှင့်အတူချိတ်ဆက်ထားသည့် NACC ဖို့ hippocampus ...
အဆိုပါ VTA နှင့်အခြား dopaminergic အရေးပါနေဖြင့် hippocampal Synaptic plasticity ၏စည်းမျဉ်း။ hippocampal Synaptic plasticity ၏ dopaminergic စည်းမျဉ်းများနှင့်နောက်ခံကွန်ယက်ကိုဤနေရာတွင်ပုံဖော်နေပါတယ်။ အပြာရောင်မြှား VTA-hippocampal activated ဟာအသစ်အဆန်းညွှန်ပြ ...
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားသည် hippocampus အပေါ် impinge သော dopaminergic အရေးပါ၏လူသိများအခန်းကဏ္ဍ DA အသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်-related အတွေ့အကြုံကိုအားဖြင့်၎င်း, ဤအချက်အလက်က process လုပ်တယ်သတင်းအချက်အလက်များမှအဓိပ္ပာယ် add ဖို့ hippocampus ဖွကြောင်းပြန်လွတ်လာကြောင်းထောက်ခံပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းဖြင့်, salience သိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုမှအပ်နှင်းသည်။ မတူညီသော hippocampal subfields အတွက် LTP နှင့်, LTD ၏ဆွေမျိုးစည်းမျဉ်းကတော့ hippocampus ထို့နောက်တစ်ဦးမှတျဉာဏျ engram သို့မဟုတ် Spatial ကိုယ်စားပြုမှုသို့ဤအချက်အလက်ပေါင်းစပ်ပြီးနှင့် encodes ရာမှတဆင့်တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ DG အတွက် LTP အပေါ် D1 / D5 receptor ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
အဆိုပါ DG အဆိုပါ hippocampus ဖို့အလုပ်လုပ်တဲ့ "တံခါးပေါက်" ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်သွေးဆောင် LTP အပေါ်ရောနှောထားသောသက်ရောက်မှုကဒီဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ D1 / D5 receptors ၏ activation (စားပွဲတင်ပြီးနောက်အစီရင်ခံခဲ့ကြ 1တစ်ဦးက), ဒါပေမယ့်အများစု LTP တစ်ခုတားစီး D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (အောက်ပါအစီရင်ခံထားသည်Yanagihashi နှင့် Ishikawa 1992; Kusuki et al ။ 1997; Swanson-ပန်းခြံ et al ။ 1999) ။ ဤ receptors LTP ဝင်လာသောလှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်အတွက် DG ထဲတွင်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းရှိမရှိအဆုံးအဖြတ်အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ တစ်ဦး "ဆုလာဘ်" သို့မဟုတ် "အသစ်အဆန်း" signal ကိုစဉ်အတွင်း D1 / D5 အဲဒီ receptor activation (DG စိတ်လှုပ်ရှားတိုးမြှင့်ဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီHamilton က et al ။ 2010(ဝတ္ထုအာရုံခံအချက်အလက်များကို hippocampal CA3-CA1 ဒေသ၏ circuitry ရိုက်ထည့်ဖို့ DG ၏သတင်းအချက်အလက်များတံခါးပေါက်များနှင့် filter ကိုဖြတ်သန်းကြောင်း) ထိုသို့သောHeinemann et al ။ 1992; Hamilton က et al ။ 2010) ။ ဒီအလှည့် (ပုံစံပြီးစီးအတွက် DG ၏ function ကိုဆက်စပ်စေခြင်းငှါKesner et al ။ 2000).
D1 / D5 receptors နှင့် hippocampal Synaptic plasticity
တစ်ဦးထက်ပိုသောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသဘောအရပြန်ကြားရေး Gates လည်း DA ကထောက်ခံသည်။ Gates ၏ဤအမျိုးအစား (သင်ယူခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ကွဲပြားခြားနားသောဦးနှောက်ဧရိယာများအကြား oscillatory ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှု enable စေခြင်းငှါBuzsaki နှင့် Draguhn 2004) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ဥပမာ, (ထို hippocampus မှပရောဂျက်တစ်ခုကိုထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်းတွင် neuron များ၏ medial septal / ဒေါင်လိုက်ခြေလက်များတွင်ပစ်ခတ် theta ပေါကျကှဲ modulate နိုင်ပါတယ်Fitch et al ။ 2006) ။ ထို့အပွငျ DA (D3 အဲဒီ receptor activation ကနေတဆင့်ဧရိယာ CA1 အတွက် cholinergic gamma လှိုဖိနှိပ်Weiss et al ။ 2003) ။ ဒါဟာအာရုံခံ (theta နှင့် gamma အကြိမ်ရေ volley ၏ DA အထူးသဖြင့်အတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းအတွက်အကြိမ်ရေပစ်ခတ်ရန်ပုံစံကြောင်းအကြံပြုထားသည်; Ito ကနှင့် Schumann 2007) ကြွက်များ၏ရှာဖွေတူးဖော်ခွင့်အပြုအမူစဉ်အတွင်း enthorinal cortex အတွက်လေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြကြောင်း (Chrobak et al ။ 2000) ဖြင့်အချက်အလက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာပြောင်းလဲနေတဲ့။
အဆိုပါ CA1 ဒေသကြီးအတွင်းရှိ LTP အပေါ် D5 / D1 receptor ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
သာ L-LTP ထိခိုက်နေသည်ရှိရာ DG, မတူဘဲ, SC-CA1 synapses ၏အတွင်းစသည်တို့လေ့လာမှုများ, E-LTP (နှစ်ဦးစလုံးကြောင့်ပြသOtmakhova နှင့် Lisman 1996) နဲ့ L-LTP (Frey et al ။ 1991; Huang ကနှင့် Kandel 1995) (တားဆီးသို့မဟုတ်လျှော့ချနေကြသည်Swanson-ပန်းခြံ et al ။ 1999) တစ်ဦး D1 / D5 ရန်အသုံးပြုပုံ D1 / D5 receptors ၏ agonists တိုးမြှင် E-LTP (ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသော်လည်းOtmakhova နှင့် Lisman 1996) ။ e- နဲ့ L-LTP နှစ်ဦးစလုံး၏ပြင်းအားကိုလည်းသိသိသာသာ D1 အဲဒီ receptor ထံမှ hippocampal ချပ်ထဲမှာလျှော့ချဖြစ်ပါတယ် - / - ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြွက် (Granados et al ။ 2008) ။ ဤအတွေ့ရှိချက်နှင့်အညီ, Vivo လေ့လာမှုများအတွက် SC-CA1 synapses မှာ HFS-သွေးဆောင် LTP (လွတ်လပ်စွာပြုမူကြွက်များတွင် D1 / D5 အဲဒီ receptor activation အားဖြင့် facilitated ကြောင်းပြသသံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006; စားပှဲ 1တစ်ဦးက) ။ သို့သော် D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (SC-CA1 synapses သာ L-LTP ကာကွယ်ပေးသည်သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ ထဲမှာစသည်တို့အကြားနှင့် Vivo လေ့လာမှုများအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမတူညီသောခိုင်ခံ့ပြီး Duration ၏ LTP ထုတ်ယူနိုင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်ကြောင်းဆွ protocols များ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးဆက်စပ်ပေမည်။
LTP ၏ Depotentiation အပေါ် D1 / D5 receptor လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
က Synaptic plasticity တစ် persistent ပုံစံမဟုတ်ပေမယ့်, depotentiation hippocampal Synaptic plasticity (ဇယား၏ D1 / D5 စည်းမျဉ်းများ၏အခြေအနေတွင်အတွက်ဖော်ပြထားခြင်းဖြင့်သမုတ်သော 1ကို C) ​​။ Depotentiation (LTP inducing ၏ LFS ဟာအလွန်တိုတောင်းသောအချိန်ပြတင်းပေါက်အတွင်းလျှောက်ထားသောအခါဖြစ်ပေါ်ကြောင်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်စဉ် (အများဆုံး 30 မိ) ဖြစ်ပါသည်Staubli နှင့် Lynch 1990; Kulla et al ။ 1999) နှင့်တက်ကြွမေ့လြော့ရာသို့မဟုတ်ဖြစ်ကောင်းဝင်ရောက်စွက်ဖက်သင်ယူခြင်းတစ်အလုပ်လုပ်တဲ့ Correlate ပါဝင်ဖို့အဆိုပြုပြီးပါပြီ။ ကα-အမိုင်နို-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic အက်ဆစ်အဲဒီ receptor အဲဒီ receptor ၏တူညီသော phosphorylation / dephosphorylation ပရိုဖိုင်းကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမ Synaptic plasticity ၏ဤပုံစံ (, LTD မှကွဲပြားဖြစ်ပါသည်Lee က et al ။ 1998) နှင့်ဥပမာ mGlu အဲဒီ receptor ligands (မှကွဲပြားခြားနားသော, စိတ်တွေရှိပါတယ်Manahan-Vaughan 1997; Fitzjohn et al 1998; Kulla et al ။ 1999; Kulla နှင့် Manahan-Vaughan 2008) ။ အခြား input ကိုအတွက် L-, LTD သို့ e- facilitated တဦးတည်း input ကိုအတွက် L-LTP အားဖြင့် plasticity-related ပရိုတိန်း (PRPs) ၏ပေါင်းစပ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းကြွက်များတစ်ခုစသည်တို့လေ့လာမှုအားဖြင့်ပုံအောအဖြစ် depotentiation ၏နောက်ထပ်ရှုထောင့်, ဒီဖြစ်စဉ်၏ The Associated စည်းမျဉ်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်တဦးတည်း Synaptic input ကိုအတွက်ရေရှည် plasticity Associates အခြား Synaptic input ကို၏ PRPs အားဖြင့်သွေးဆောင်သည်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် "လက်ဝါးကပ်တိုင်မှတ်သားခြင်း" (ရည်ညွှန်းSajikumar နှင့် Frey 2004) ။ Associative ရေရှည် plasticity နှင့် Synaptic မှတ်သားခြင်းကိုလည်း (D1 / D5 အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ဟန်Sajikumar နှင့် Frey 2004).
စိတ်ဝင်စားစရာ D1 / D5 အဲဒီ receptor ခြယ်လှယ် (စသည်တို့နှင့် Vivo အတွက်နှစ်ဦးစလုံး LTP ၏ LFS-သွေးဆောင် depotentiation အပေါ်သက်ရောက်မှုOtmakhova နှင့် Lisman 1998; Kulla နှင့် Manahan-Vaughan 2000) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor ရန်ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုတားစီးသော်လည်း D1 / D1 အဲဒီ receptor agonists (CA5 နှင့် DG အတွက် LFS အားဖြင့် LTP ၏ depotentiation လျှော့ချKulla နှင့် Manahan-Vaughan 2000) ယူဆရတစ်သိသိ 3'5 '' adenosine monophosphate (Camp) -dependent ယန္တရား (မှတဆင့်Otmakhova နှင့် Lisman 1998).
depotentiation မေ့ပါဝင်သည်ဆိုပါက D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဆီးတားနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ LTP ၏ depotentiation တစ်အဆက်ဆက်ဖြစ်စဉ်ကို-ပထမဦးဆုံး LTP သွေးဆောင်သည်နှင့်နောက်မှ depotentiation အစပျိုးနေသည်ကြောင့် D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ပိုင်းတွင်ရေရှည်သိုလှောင်မှုအတွက်လျာထားခဲ့ကွောငျးသတငျးအခကျြကိုမေ့လျော့နေတဲ့ "ဆုံးဖြတ်ချက်" ဗီတိုအာဏာသုံးနိုင်သည်ကိုဆိုလို။ တနည်းကား, ဒီဖြစ်နိုင်ခြေအချက်အလက်ဆိုင်ရာ salience ဖြန်ဖြေတွင်ဤ receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသို့ကောင်းစွာကိုက်ညီ။
Hippocampal, LTD အပေါ် D1 / D5 receptor လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ, LTD အဆိုပါ hippocampus မှ patterned afferent ဆွအောက်ပါဖြစ်ပေါ်ကြောင်း Synaptic ခွန်အား၌မြဲလျှောက်လျော့နည်းပါဝင်သော LTP တစ်ဦးမှန်ပုံရိပ်ဖြစ်ပါသည်။ မကြာသေးမီနှစ်များတွင်ဒီဖြစ်ရပ်ဆန်းဖွယ်ရှိ Spatial နှင့် / သို့မဟုတ်မှတ်ဥာဏ်ကိုယ်စားပြု (ထုတ်လုပ်ဖို့ LTP နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုယန္တရားကြောင်းသိသာဖြစ်လာသည်Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2007) ။ ဒီဖြစ်စဉ်အဘို့, LTP ကဲ့သို့ D1 / D5 receptors လည်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပေါ်လာပါသည်။ အဆိုပါ CA1 ဒေသနှင့် DG ပြင်းထန်စွာလေ့လာခဲ့ကြပြီဘယ်မှာ LTP, မတူဘဲ, ဒါဝေး, သတင်းအချက်အလက်ကိုသာ CA1 ဒေသတွင်း၌, LTD အပေါ် D5 / D1 အဲဒီ receptor သက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. တည်ရှိ (ဇယား 1ခ)
CA1 synapses ၏ LFS အားဖြင့်သွေးဆောင် E-, LTD, (စသည်တို့အတွက် D1 / D5 အဲဒီ receptor ရောကျသောအားဖြင့် facilitated ဖြစ်ပါတယ်ချန် et al ။ 1995; လျူ et al ။ 2009) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, E-, LTD (စသည်တို့အတွက် CA1 synapses အတွက် D5 / D1 အဲဒီ receptor ရန်ပိတ်ဆို့နေသည်ချန် et al ။ 1995) ။ ထို့အပွငျစသည်တို့လေ့လာမှုများအတွက် CA1 synapses အတွက် E-နဲ့ L-, LTD နှစ်ဦးစလုံး (D1 / D5 အဲဒီ receptor activation အပေါ်မှီခိုဖြစ်ကြောင်းပြသMockett et al ။ 2007; လျူ et al ။ 2009) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း LFS-သွေးဆောင် E-, LTD နဲ့ L-, LTD (ကာကွယ်ပေးသည်သော်လည်း D1 / D5 အဲဒီ receptor ရောကျသော, LFS-သွေးဆောင် E-, LTD နဲ့ L-, LTD နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်အဖြစ် Vivo ဒေတာအတွက်ဤရလဒ်များကိုနှင့်အတူသဘောတူသံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ သို့သော်စသည်တို့လေ့လာမှုမှာတဦးတည်းအတွက် D1 / D5 အဲဒီ receptor ရောကျသောတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း (LFS-သွေးဆောင်, LTD ပြောင်းပြန်Mockett et al ။ 2007) ။ စသည်တို့သက်ရောက်မှုတွင်ဤကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော LFS protocols များ [1200 ×3Hz (၏အသုံးပြုမှုကိုမှဖြစ်နိုင်Mockett et al ။ 2007) vs. 450 × 1 Hz (ချန် et al ။ 1995)] ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏနှင့်ကြာရှည်မှုများကို LTD ကဖြစ်ပေါ်စေသည်။ in vivo တွင် 1 Hz LFS သည် <600 ပဲမျိုးစုံကို အသုံးပြု၍ CA1 synapses တွင်အလွန်တိုတောင်းသောစိတ်ကျရောဂါ (STD) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။Popkirov နှင့် Manahan-Vaughan 2011), 3-Hz ဆွပိုပြီးကြာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ elicits သော်လည်း (Manahan-Vaughan 2000) ။ ကွဲပြားခြားနားသောအားသာချက်များနှင့် Duration ၏ Synaptic စိတ်ကျရောဂါ၏ D1 / D5 အဲဒီ receptor agonists ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအတွက်ကွာခြားချက်များ function သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ plasticity ဤပုံစံများများ၏ဆက်စပ်မှုဆက်စပ်နိုင်တယ်: အားနည်းတုံ့ပြန်မှုကိုခိုင်ခံ့စေမည်အကြောင်း, နှင့်သတင်းအချက်အလက် processing နိုင်အောင်အားကောင်းတဲ့တုံ့ပြန်မှုထင်သည်အထင်မှား, အားနည်းဖြစ်လာနိုင် optimized ဖြစ်ပါတယ်။
D1 / D5 receptor နှင့်သင်ယူ-သင်တန်းနည်းပြပလပ်စတစ်
Vivo လေ့လာမှုများအတွက်ဝတ္ထုဗလာနေရာလွတ်တူးဖော်ရေးအားဖြင့် e-LTP နဲ့ L-LTP-သင်တန်းနည်းပြသင်ယူခြင်း CA1 synapses (ထဲမှာ D5 / D1 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တားဆီးနိုင်ပြသလီ et al ။ 2003; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ ထို့အပွငျ D1 / D5 ၏ pharmacological activation (တူတဲ့ LTP ၏ Spatial အသစ်အဆန်း-သွေးဆောင်ပံ့ပိုး receptorsလီ et al ။ 2003) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor ရောကျသော (Vivo အတွက် CA1 synapses အတွက်, LTD သို့ STD နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ ဤသည် D1 / D5 အဲဒီ receptor activation CA1, LTD များအတွက်တံခါးခုံကိုလျော့နည်းစေတယ်လေသောဖြစ်နိုင်ခြေထောက်ခံပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သင်ယူမှု-facilitated, LTD အတွက် D1 / D5 receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသတင်းပေးပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာဝတ္ထု Spatial တူးဖော်ရေးအားဖြင့် facilitated ခဲ့ကွောငျး, L-, LTD (D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်တားဆီးခဲ့သည်သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor activation နဲ့ပေါင်းစပ် afferent ဆွနှင့်အတူဝတ္ထု Spatial တူးဖော်ရေး concomitant လည်း (ဖြင့်လည်း D1 / D1 အဲဒီ receptor activation hippocampal synapses အတွက်, LTD အားဖြင့်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုအတွက်တံခါးခုံကိုလျှော့ချအံ့သောငှါ supporting, CA5 synapses အတွက်နှောင့်နှေး-စတင်ခြင်းစိတ်ကျရောဂါဖွသံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2011; စားပှဲ 1B က) ။ ထို့ကြောင့်သင်ယူမှု-facilitated e- နဲ့ L-LTP D1 / D5 receptors (ဇယားကိုသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် modulated နိုင်ပါသည် 1တစ်ဦးက) ။ တနည်းကား, ဒီတွေ့ရှိချက်ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံကိုမှပြင်းထန်စွာ D1 / D5 receptors ဆက်သွယ်နှင့်ဤ receptors အဆိုပါ hippocampus ရောက်ရှိဝင်လာသောအာရုံခံသတင်းအချက်အလက်မှ salience နှင့်ဆီလျော်မှုအပ်နှင်းသောအချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဘယ်အရာကို Hippocampal Synaptic ပလပ်စတစ်၏ D1 / D5 စည်းမျဉ်းဥပဒေထဲမှာကွာခြားချက်များကိုဖွင့်?
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤလေ့လာမှုများ D1 / D5 receptors အဆိုပါ CA1 ဒေသနှင့် DG အတွက် LTP အပေါ်တူညီသက်ရောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးကြောင်းထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုပါ CA1 ဒေသ, E-LTP နဲ့ L-LTP နှစ်ဦးစလုံး D1 / D5 receptors နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံရအတူပိုမိုထိခိုက်မခံဖြစ်ပေါ်လာသည်။ အဆိုပါ DG မှာတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်သာ L-LTP ထိခိုက်နေပါတယ်။ ဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ရောင်စဉ်မှထည့်သွင်းခြင်း, LTD, depotentiation နှင့်သင်ယူမှု-facilitated plasticity ၏ D1 / D5 receptors အားဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Synaptic plasticity ၏ဤမျှလောက်များစွာသောကွဲပြားခြားနားသောရှုထောငျ့၏ D1 / D5 receptors အားဖြင့်ဤသည်ကိုပစ်မှတ်ထားစည်းမျဉ်းကတော့ hippocampus အတွက် D1 / D5 receptors ၏ဆွေမျိုးစကားရပ်, နှင့်ကက်စကိတ်အချက်ပြဤ receptors ၏ဆွေမျိုးနားချင်းဆက်မှီဆက်စပ်ပေမည်။ D1 နှင့် D5 နှစ်ဦးစလုံး receptors (မျောက်အတွက် hippocampus ၏ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေအတွက်နှစ်ဦးစလုံးထင်ရှားတဲ့များမှာBergson et al ။ 1995) နှင့်လှာ oriens နှင့် radiatum အတွက်ဆဲလ်တွေကြွက်များတွင် D1 / D3 receptors ဖော်ပြအပါအဝင် CA1-5 အတွက်ပိရမစ်ကြီးအာရုံခံ, (Fremeau et al ။ 1991) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor mRNA ကိုလည်း (ထို DG ၏ granules ဆဲလ်နှင့် ventrally အဆိုပါ subiculum ရှုပ်ထွေးအများစုတွင် neuron အတွက် dorsally ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီနေသည်Fremeau et al ။ 1991) ။ ထို့အပွငျ D5 receptors (ထို subiculum ၏ပိရမစ်ကြီးဆဲလ်တွေ၌၎င်း, ကြွက်လူသားများနှင့်မျောက်များ၏ CA1-CA3 ဒေသထဲမှာ, DG ၏ hilus နှင့် granules ဆဲလ်ထဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်Ciliax et al ။ 2000; Khan က et al ။ 2000) ။ ထို့ကြောင့် D1 / D5 receptors တစ်အတော်လေးပင်ဖြန့်ဖြူးသည့် hippocampus ကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော် D1 နှင့် D5 receptors ၏အာရုံခံမူပြောင်းခြင်းအချို့ကွဲပြားခြားနားမှုတည်ရှိဖို့ပေါ်လာ: အနှောက် cortex အတွက် D1 receptors အဓိကအား dendritic ကျောရိုးတွင်တွေ့နေကြတယ်, D5 receptors အဆိုပါ PFC အတွက် dendritic ရိုးတံအပေါ်အများစုပေါ်ပေါက်သော်လည်း (Bergson et al ။ 1995) ။ D1 / D5 receptors များ၏ဒေသခံများတွင်ဤ subcellular ကွဲပြားခြားနားမှု (functional သက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါBergson et al ။ 1995) ။ ပိရမစ် dendritic ကျောရိုး (excitatory glutamatergic ခံယူအဖြစ်Harris ကနှင့် Kater 1994) နှင့် dendritic ရိုး inhibitory gamma-aminobutyric အက်ဆစ် (ဂါဘမြို့သား) ergic input ကို (ဂျုံးစ် 1993), က D1 receptors excitatory အတွက်အဓိကအားဖြင့်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, inhibitory အတွက် D5 receptors, neuromodulation (Bergson et al ။ 1995).
Immunohistochemical စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအတွက် DG ၏ granules ဆဲလ်အလွှာ၏ glutamatergic excitatory projection အာရုံခံရန်နှင့်မျိုးစုံအတွက် hilus ၏ inhibitory GABAergic interneurons အမျိုးအစားများနှင့်မောက် hippocampus အတွက် CA1 / CA3 လယ်ကွင်း (ရန် D1 အဲဒီ receptor ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီGangarossa et al ။ 2012) ။ ဤရွေ့ကား GABAergic interneurons (အ granules ဆဲလ်များ၏ညှိ output ကိုထိန်းညှိစေခြင်းငှါမိုင် et al ။ 1996), DA, ဤ interneurons အပေါ်သရုပ်ဆောင်ကြောင်းညွှန်ပြသည့် hippocampal ဆားကစ်အတွက်သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့သြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်။ မျောက်အတွက် hippocampus နှင့် PFC ၏ CA1 ဒေသမှာတော့ D1 / D5 receptors (အကျူးဖြစ်ကြပြီး postsynaptically ဒေသခံစံနှုန်းကိုက်ညီBergson et al ။ 1995), အကျူးများနှင့် postsynaptic DA-mediated ယန္တရားများ Synaptic အစွမ်းသတ္တိ၏မော်ဂျူသွေးဆောင်ညွှန်ပြ။ အဆိုပါ GABAergic စနစ်ကတဆင့်စိတ်လှုပ်ရှား၏တစ်ဦးကတင်းကျပ်စွာစည်းမျဉ်း epileptiform ဖြစ်ရပ်များသို့မြင့်တက်ရာမှ LTP ဖြစ်ရပ်တားဆီးအတွက်, ဒါပေမယ့်လည်း, LTD နှင့် functional အကွာအဝေးအတွင်း Synaptic စိတ်လှုပ်ရှားများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု (အဘို့မသာအရေးပါသောအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်Baudry 1986; Wagner နှင့် Alger 1995; Kullmann et al ။ 2000).
ဝိရောဓိ, Gangarossa et al ။ (2012) ဒီမဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် D1 / D1 အဲဒီ receptor activation hippocampal-မှီခိုသင်ယူမှု, မှတ်ဉာဏ် (အဘို့လိုအပ်သော်လည်းအဘယ်သူမျှမ D1 receptors, မောက်၏ CA5 လှာ radiatum ရှိကြောင်းပြသO'Carroll et al ။ ၂၀၀၆; Bethus et al ။ 2010), နှင့် SC-CA1 synapses မှာ persistent plasticity (သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006) ။ ဤသည် D5 receptors SC-CA1 synapses မှာ plasticity အပေါ်သက်ရောက်မှု၏အဓိကပြုပြီဖြစ်မည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ D1 receptors (သို့သော်, TA-CA1 synapses အပေါ်တွေ့ရှိခဲ့သည်Gangarossa et al ။ 2012), SC-CA1 synapses မတူဘဲအတွက် TA-CA1 synapses မှာ plasticity D1 receptors နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်စေခြင်းငှါအကြံပြုခြင်း။
ဒါဟာ hippocampus ၏ dopaminergic D1 / D5 အဲဒီ receptor ဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် dopaminergic ဖိုင်ဘာ innervations အကြားတစ်ဦးမတိုက်ဆိုင်တည်ရှိကြောင်းထောက်ပြဖို့လည်းအရေးကြီးပါတယ်။ ကြွက်များတွင်လေ့လာရေးအတွက် dorsal hippocampus အဆိုပါ VTA (ထံမှသိပ်သည်း noradrenergic innervations အားလက်ခံတွေ့ဆုံပေမယ့်ရံဖန်ရံခါ dopaminergic innervation ကြောင်းသရုပ်ပြSwanson နှင့် Hartman 1975; Scatton et al ။ 1980) ။ ထို့အပြင်တစ်ဦးကွာဟမှုကို (hippocampus နီးပါး-ပျက်ကွက် dopaminergic အမျှင်အတွက် D1 / D5 receptors တွေရဲ့အားကောင်းတဲ့ immunostaining အကြားလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်Smith ကများနှင့်ဂရင်း 2012) ။ အဆိုပါ hippocampus ဖို့ VTA ထံမှ dopaminergic အမျှင်စီမံကိန်းကို (Scatton et al ။ 1980; Gasbarri et al ။ 1994, 1997), ဒါပေမယ့် VTA မှဤ dopaminergic input ကိုအဓိကအား (ထို ventral hippocampus ပစ်မှတ်ထားနှင့်ထိုကဲ့သို့သော dorsal hippocampus ၏လှာ radiatum အဖြစ်ဖွဲ့စည်းပုံ innervate ပါဘူးSwanson 1982; Gasbarri et al ။ 1994, 1997) ။ ဤသည် DA အားလုံးမှာ dorsal hippocampal function ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပုံကိုမှအဖြစ်မေးခွန်းပြောခြင်းငှါ။ ဥပမာအားဖြင့်, hippocampal noradrenergic အာရုံခံအတွက်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်သိသိသာသာ DA အဆင့်ဆင့်လျှော့ချအဖြစ်သို့သော် hippocampus အတွက် DA အဆင့်ဆင့်ဖွင့် (dopaminergic innervations အပေါ်မူတည်ပါဘူးBischoff et al ။ 1979) ။ ထိုမှတပါး, locus coeruleus (LC) အမျှင်ထူထပ် (အလှာ radiatum အပါအဝင် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေး innervateMoudy et al ။ 1993) နှင့် CA1 ဒေသတွင်း၌ noradrenergic LC အမျှင်ကနေ DA တစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိ enable (Smith ကများနှင့်ဂရင်း 2012) ။ ဒါဟာ DA ထိုလှာ radiatum မှ DA ၏ကန့်သတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပျက်ကွက်, VTA-mediated လွှတ်ပေးရန်နှင့်အခြား dorsal hippocampal ငျဒသေအတှကျ "လျော်ကြေးပေး" ကို noradrenergic ဖိုင်ဘာဆိပ်ကမ်းကနေဖြန့်ချိခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါ, အရှင်ဖြစ်နိုင်အရှင် Synaptic plasticity ထိန်းညှိဖို့ DA ဖွင့်ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များသင်ယူခြင်း ကြောင်း dorsal hippocampal အဆောက်အဦများကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။
D1 / D5 receptors differential (သက်ဆိုင်ရာ hippocampal ငျဒသေပေါ် မူတည်. E-LTP နှင့် -LTP ထိန်းညှိHuang ကနှင့် Kandel 1995; Otmakhova နှင့် Lisman 1996; Kulla နှင့် Manahan-Vaughan 2000; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2006; Granados et al ။ 2008) ။ D1 နှင့် D5 receptors ၏တစ်ဦးကအတော်လေးကွဲပြားခြားနားသောစကားရပ်ကြောင့် receptors ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြမှုကက်စကိတ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, LTP ၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်လွှမ်းမိုးအသုံးပြုပုံအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဖျန်ဖြေနိုင်ဘူး။ D1 အဲဒီ receptor တုံ့ပြန်မှုအများစု phosphoinositide မှအပြုသဘောနားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်သော်လည်း D5 အဲဒီ receptor အချက်ပြ (adenyl cyclase (AC) မှအပြုသဘောနားချင်းဆက်မှီမှတဆင့်ဖွင့်ပေးထားUndieh 2010; သဖန်းသီး။ 1) ။ ထို့ကြောင့်ဖြစ်စေအဲဒီ receptor ၏ activation မလွှဲမရှောင်ဖြစ်နိုင်သည်ကွဲပြားခြားနားသောပရိုတိန်း၏ဆိုသော်ငြား phosphorylation ဖြစ်စဉ်များဆီသို့ဦးတည်ပါလိမ့်မယ်။ နှစ်ဦးစလုံး signal ကိုကက်စကိတ် (D1 နှင့် D5 receptors) ကို hippocampus အတွက်ရေရှည် Synaptic plasticity အထောက်အပံ့စခန်းတုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding ပရိုတိန်း (CREB) (အပေါ်ဆုံဘုံလမ်းကြောင်းအပေါ်နောက်ဆုံးမှာဆုံBarco et al ။ 2002).
D1 receptors မှတဆင့် AC အများ၏ activation အဆိုပါ intracellular ဒုတိယတမန်စခန်းများ adenosine triphosphate ၏ပြောင်းလဲခြင်း catalyzes ။ ရလဒ်အဖြစ်ပရိုတိန်း kinase တစ်ဦးက (PKA) လှုပ်ရှားမှု, စခန်းတစ်ခုပစ်မှတ်, တိုး (Vallone et al ။ 2000; Undieh 2010) ။ PKA phosphorylation ၏ပစ်မှတ်ဟာ DA နှင့်စခန်း-စည်းမျဉ်းသတ်မှတ် 32-KDA phosphoprotein (DARPP-32) ကို hippocampus (DARPP-32 ၏ DG အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်၏ Undieh 2010), ရာ activation (NMDA အဲဒီ receptor function ကို၏အလားအလာမှဦးဆောင်Cepeda နှင့် Levine 2006) ။ DA-အထိခိုက်မခံ PKA activation လည်း T-type အမျိုးအစား Ca ထိန်းညှိ2+ ရေစီးကြောင်း (Drolet et al ။ 1997) နှင့်နျူကလီးယားကူးယူအချက်ကယ်လစီယမ်-တုံ့ပြန်မှုဒြပ်စင်-binding နှင့် CREB ပရိုတိန်း၏ activation CREB ပရိုတိန်းစကားရပ်မှဦးဆောင် (Undieh 2010; သဖန်းသီး။ 1).
D1 receptors မတူဘဲခုနှစ်, D5 receptors ၏ phosphoinositide လမ်းကြောင်းကနေတဆင့်ပြ (ဒုတိယတမန်တို့ကို diacylglycerol နှင့် inositol-4,5-trisphosphate ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် phosphotidylinositol-1,4,5-biphosphonate ၏ Hydrolysis induces သော phospholipase ကို C (PLC) မြှင့်လုပ်ဆောင်Berridge နှင့် Irvine 1984) ။ သို့သော် D5 receptors ၏ activation လည်း (Camp နှင့် PKA လမ်းကြောင်းလှုံ့ဆော်နိုင်ပါတယ်Beaulieu နှင့် Gainetdinov 2011; သဖန်းသီး။ 1) ။ inositol ဖော့စဖိတ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း (intracellular ကယ်လစီယမ်စတိုးဆိုင်တစ်ခုစည်းရုံးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်Undieh 2010), ကြောင်းအလှည့်အတွက် Synaptic plasticity ၏ပေးရန်အတွက်အရေးပါသောခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုးမြှင့် intracellular ကယ်လစီယမ် CREB activation (ပုံမှဦးဆောင်ကယ်လစီယမ်-calmodulin-မှီခိုပရိုတိန်း kinase အမျိုးအစား II ကိုမြှင့်လုပ်ဆောင်။ 1) ။ ထို့ကြောင့် D1 နှင့် D5 receptors ၏ activation (2 ကွဲပြားအချက်ပြလမ်းကြောင်းကနေတဆင့် CREB activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်ပါတယ်Undieh 2010) ။ အဆိုပါ AC အများနှင့် PLC စနစ်များအကြားအတော်ကြာ crosstalks (တည်ရှိUndieh 2010, သဖန်းသီး။ 1) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ၏ကွဲပြားခြားနားသောအချက်ပြမှုကက်စကိတ်၏နားချင်းဆက်မှီ, အရှင် (LTP ၏အဆင့်၏စည်းမျဉ်းနှင့် ပတ်သက်. ကွဲပြားခြားနားသောလုပ်ငန်းဆောင်တာကိုထောက်ပံ့, ဒါပေမယ့်လည်း, LTD ၏စခွေငျးငှါမသာCentonze et al ။ 2003) အခြား receptors သို့မဟုတ် neuromodulators (နဲ့အတူ interaction ကနှင့်အတူလျူ et al ။ 2000) အလှည့်တွင်ဤ plasticity ဖြစ်ရပ်များ၏အသက်ရှည်သြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်ပါဘူး။
D1 / D5 receptor Hippocampal အာရုံခံ၏ Dendrites (မှာရှိတဲ့ဒေသခံပရိုတိန်းဖွဲ့စည်းခြင်းလှုံ့ဆော်အဖြစ်Smith က et al ။ 2005), က D1 / D5 receptors L-LTP များအတွက်လိုအပ်သောပရိုတိန်းဘာသာပြန်ချက်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ကြောင်းဖွယ်ရှိသည်။ (ဒီနှင့်အညီ, (အသစ်အဆန်းရှာဖွေရေး၏ 1 မိအတွင်း) hippocampal D5 / D15 receptors လုပ်ကွက် L-LTP များ၏ပိတ်ဆို့ထားခြင်းနှင့်နေရာမှတ်ဉာဏ်ကိုကာကွယ်တားဆီးဝမ် et al ။ 2010) ။ အသစ်အဆန်းရှာဖွေရေး (ထို CA1 ဒေသအတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ Arc တစ်ခုတက်-စည်းမျဉ်းထွက်လာပါတယ်, DA လွှတ်ပေးရန် inducesGuzowski et al ။ 1999) ။ D1 အဲဒီ receptor activation (ကိုလည်း DG အတွက် Zif268 အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့် Arc / Arg3.1 စကားရပ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးဗီဇမှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းများနှင့် Synaptic plasticity တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Gangarossa et al ။ 2011) ။ ဤသည် DA, D1 / D5 receptors ကနေတဆင့်, ရေရှည် plasticity မှဦးဆောင်မှတ်တမ်းဖြစ်စဉ်များလှုံ့ဆော်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ Hippocampal D1 / D5 receptors အထူးသ (ရေရှည် plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုခိုင်မာအောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သော plasticity-related ပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်သွေးဆောင်ရန်လိုအပ်သည်Moncada et al ။ 2011) ။ ထိုကဲ့သို့သောပရိုတိန်း kinase M က Zetas (အဖြစ်နောက်ဆက်တွဲ PRPs များအတွက်အထူးသဖြင့် synapses မှာ "Synaptic tag ကို" ၏ setting ကိုNavakkode et al ။ 2010) (စဉ်ဆက်မပြတ် LTP များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်Frey နှင့်မောရစ် 1997) ။ စသည်တို့စမ်းသပ်ချက်များတွင် (D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ဤဖြစ်စဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါအကြံပြုSajikumar နှင့် Frey 2004; စားပွဲတင်တွေ့မြင် 1) ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့် L-LTP တားစီး, အရှင်သည်ဤ receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်သွေးဆောင်ဘယျလိုမှပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ဦးမော်လီကျူးအဆင့်တွင်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါတယ်။
, LTD သို့မဟုတ် LTP ဖြစ်စေ inducing အတွက် DA ၏ dual-action ကို (, LTD တွင်သို့မဟုတ် LTP အတွက်ဖြစ်စေဦးဆောင်ကွဲပြားခြားနားသော phosphorylation ဖြစ်စဉ်များအပေါ်တစ်ဦးအာရုံစူးစိုက်မှု-မှီခိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်Saijkumar နှင့် Frey 2004) ။ E-LTP နှင့် E-, LTD နှစ်ဦးစလုံး၏တစ်ဦး NMDA အဲဒီ receptor မှီခိုပုံစံများ၏မော်ဂျူပု CA1 ဒေသတွင်း၌ D5 / D1 အဲဒီ receptor တက်ကြွစွာ DA signal ကိုဒီ hippocampal မဟာမဲခေါင်ဒေသတွင်းအတွက် ERK2 activation သွေးဆောင်ဖို့ NMDA အဲဒီ receptor အပေါ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မှတဆင့် (Kaphzan et al ။ 2006) ။ D1 / D5 receptors လည်း (တိုက်ရိုက် NMDA အဲဒီ receptor ထိန်းညှိCepeda et al ။ 1998; Stramiello နှင့် Wagner 2008; Varela et al ။ 2009) နှင့်နှစ်ဦးစလုံး LTP နှင့်, LTD သော induction တံခါးခုံကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင် (Cummings က et al ။ 1996), နှင့် CREB နှင့်ပရိုတိန်းဓာတ်ပေါင်းစပ်၏ activation ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြသော D1 / D5 receptors များက activated ကက်စကိတ်အချက်ပြ (Smith က et al ။ 2005; Moncada et al ။ 2011; Sarantis et al ။ 2012) ။ , LTD (မှီခိုပရိုတိန်းပေါင်းစပ်ဖြစ်ပါသည်Manahan-Vaughan et al ။ 2000) ။ ကြောင့် D1 / D5 receptors ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း (LTD မှပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကာကွယ်ပေးသည်ဟူသောအချက်ကိုမှSajikumar နှင့် Frey 2004) ပရိုတင်းပေါင်းစပ် inhibitors နဲ့ဆင်တူတဲ့ထုံးစံ၌ (Sajikumar နှင့် Frey 2003), ဒါကြောင့် (DA တိုက်ရိုက် LTP ရန်, ဒါပေမယ့်လည်း, LTD မှသာဆက်စပ်ကြောင်း plasticity-related ပရိုတိန်း၏ပေါင်းစပ်မှုအတွက်လိုအပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံရအံ့သောငှါ postulate ဖို့သွေးဆောင်Sajikumar နှင့် Frey 2004).
Hippocampus-မှီခိုသင်ယူအပေါ် D1 / D5 receptor လုပ်ဆောင်ချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
အဆိုပါဖျောပွတွေ့ရှိချက်ဟာအလွန်တင်းကျပ်စွာ link ကိုပု D1 / D5 receptors အားဖြင့် Synaptic plasticity ၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ hippocampus-မှီခိုသင်ယူမှုအတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများအကြားတည်ရှိကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ hippocampus (သင်ယူမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အတွက်အလွန်အရေးပါအခန်းကဏ္ဍEichenbaum et al ။ 1990; Mishkin et al ။ 1998) နှင့် Spatial နှင့် Episode မှတ်ဉာဏ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည် (Burgess et al ။ 2002) ။ လူ့ Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် dopaminergic midbrain ပါဝင်သူ (Schott et al ။ 2006) ။ ထို့အပြင်ကြွက်များတွင်အသစ်တွဲအပေါင်းအသင်း (Episode-တူသောမှတ်ဉာဏ်တာဝန်) ၏ hippocampus-mediated ဝယ်ယူရေရှည်မှတ်ဉာဏ် D1 / D5 receptors ၏ activation လိုအပ်သည်။ ဆနျ့ကငျြစောစောမှတ်ဉာဏ် D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ထိခိုက်ဖြစ်ပါသည် (Bethus et al ။ 2010), နှင့် DA (ပြီးသား-ထူထောင်အမှတ်တရများပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ရယူခြင်းအပေါ်မျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်O'Caroll et al ။ ၂၀၀၆; စားပှဲ 2).
D1 / D5 receptors နှင့် hippocampus-မှီခိုသင်ယူမှု
ကြွက်များတွင် D1 agonist ကုသမှု (hippocampus-မှီခို Spatial မှတ်ဉာဏ်ပိုကောင်းစေပါတယ်Bach et al ။ 1999; da Silva et al ။ 2012) nonspatial မှတ်ဉာဏ်ထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ (da Silva et al ။ 2012) ။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့်, D1 / D5 အဲဒီ receptor ရန် (ရေတိုနှင့်ရေရှည် Spatial မှတ်ဉာဏ်အယှက်Clausen et al ။ 2011; da Silva et al ။ 2012) ။ Transgene ကြွက်တွေမှာလေ့လာရေး (သော D1 အဲဒီ receptor အကြံပြုel-Gundi et al ။ 1999) နှင့် D3 သို့မဟုတ် D5 အဲဒီ receptor Spatial သင်ယူမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောမ (Granados et al ။ 2008; Xing et al ။ 2010) ။ အဆိုပါ D1 အဲဒီ receptor ကိုလည်းဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်မှာနှင့်ပလတ်စတစ် hippocampal ကိုယ်စားပြု (များ၏ကုဒ်အလွန်အရေးပါသည်Tran et al ။ 2008) ။ အဆိုပါ D1 အဲဒီ receptor (နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက် L-LTP သို့ E-LTP ၏အကူးအပြောင်းနှင့်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးများအတွက်လိုအပ်သောပရိုတိန်း Zif268 နှင့်ကို arc ၏ induction ဘို့အရေးကြီးသည်Granados et al ။ 2008), နှင့် D1 / D5 receptors တွေရဲ့တက်ကြွစွာ hippocampus အတွက်မြဲမှတ်ဉာဏ်သဲလွန်စ generate မှတျဉာဏျ encoding ကနေစဉ်အတွင်းလိုအပ် (O'Carroll et al ။ ၂၀၀၆) ။ ထိုကဲ့သို့သောဂန္ eyeblink အေးစက်အဖြစ် hippocampal-မှီခိုသင်ယူမှု၏အခြားပုံစံများ၏ Synaptic ခွန်အား၌သင်ယူ-မှီခိုအပြောင်းအလဲများ, (Kuo က et al ။ 2006, ဆူဇူကီး 2007; Madronal et al ။ 2009), အစ (D1 အဲဒီ receptor activation အားဖြင့် modulated နေကြတယ်Ortiz et al ။ 2010) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် D1 / D5 အဲဒီ receptor တက်ကြွစွာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်ထဲမှာ Spatial ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်အရေးပါအချက်ကြောင်းအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ယင်းတွေ့ရှိချက်ဟာ hippocampus နှင့် Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှ D1 / D5 receptors ၏ဆွေမျိုးအလှူငွေအတွက် DA အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲမောင်းနှင်အရာကိုအဖြစ်မေးခွန်းကိုတင်ပြထားတယ်။ တစ်ခုမှာအဓိကအချက်အသစ်အဆန်းဖို့တုန့်ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ hippocampus အတွက် DA လွှတ်ရာတစ်ဦးကအလွန်အမင်းသိသိသာသာအရင်းအမြစ်ဟာ VTA, ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှု (တုန့်ပြန်ရာဥတု၏ dopaminergic အာရုံခံတထစ်ချLjunberg et al ။ 1992; Grenhoff et al ။ 1993) (က phasic ပေါကျကှဲပုံစံနှင့်အတူLjunberg et al ။ 1992) ။ တစ်ဝတ္ထုနှိုးဆွဖို့တုန့်ပြန်၏ latency အဆိုပါ VTA နှင့် hippocampus (50-200 ms) အကြားအတော်လေးဆင်တူဖြစ်သကဲ့သို့, Lisman နှင့်ဂရေ့စပထမဦးဆုံး hippocampus အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌နှင့်ဒုတိယအ၏သွယ်ဝိုက် activation မှဦးဆောင်နေသည်ဘယ်လောက်ဝတ္ထုသတင်းအချက်အလက်သရုပ်ဖော်တဲ့သီအိုရီမော်ဒယ်အဆိုပြုထား အဆိုပါ NACC နှင့် VP မှတဆင့် VTA ။ အဆိုပါ VTA ၏သွယ်ဝိုက် activation (ထို VTA မှနောက်ဆုံးတွင် NACC ဖို့ subiculum တစ်ဦးထံမှ excitatory glutamatergic Project, ပု VP ဖို့ NACC တစ်ခု inhibitory GABAergic Project, နှင့်, ထို VP တစ်ခု inhibitory GABAergic projection မှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်Legault et al ။ 2000; Floresco et al ။ 2001, Legault နှင့်ပညာရှိ 2001; သင်္ဘောသဖန်းသီး2နှင့် and33).
ဒါဟာ DG-CA3 သည့်စနစ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အာရုံခံအချက်အလက်များဖောက်ထားလမ်းကြောင်းကိုထံမှအမှန်တကယ်ဝတ္ထုအာရုံခံဒေတာ "နှိုင်းယှဉ်" သော SC မှတဆင့် CA1 ဖို့ "ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်" သတင်းအချက်အလက်ပို့ပေးကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါကရရှိလာတဲ့ "မတိုက်ဆိုင်" signal ကိုကို (hippocampal-VTA ကွင်းဆက်၏သွယ်ဝိုက်လမ်းကြောင်း (NACC နှင့် VP) မှတဆင့် VTA မြှင့်လုပ်ဆောင်Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005) ။ လူသားတွေအတွက် Neuroimaging လေ့လာမှုများ (ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုများ၏ hippocampal-VTA-မှီခို encoding ကထောကျပံ့Wittmann et al ။ 2005; Adcock et al ။ 2006) ။ လူသားတွေအတွက်နောက်ထပ် neuroimaging ဒေတာ (နှိုးဆွအသစ်အဆန်းအားဖြင့် VTA, hippocampus နှင့် VP ၏ coactivation မီးမောင်းထိုးပြBunzeck နှင့်Düzel 2006), နှင့်ကြွက်များအတွင်းထဲမှာ Vivo လေ့လာမှု (ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုအဆိုပါ hippocampus ၏ ventral subiculum မှသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်မှီခိုသည့် NAc အတွက် DA တစ်ဦးမြင့်တက်သွေးဆောင်ကြောင်းပြသLegault နှင့်ပညာရှိ 2001).
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤတွေ့ရှိချက်ဝတ္ထုသတင်းအချက်အလက်ပထမဦးဆုံးအလှည့်အတွက်နောက်ပိုင်းတွင်အရည်အသွေး hippocampal သတင်းအချက်အလက် encoding ကသြဇာလွှမ်းမိုးသောအသစ်အဆန်း signal ကို generate ဖို့ VTA မြှင့်လုပ်ဆောင်သော hippocampus နေဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားစေခြင်းငှါထောက်ခံပါတယ်။ တစ်ဦးကြွက်တစ်ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်၌ထားသောအခါဒီနှင့်အညီ, HFS အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ DG အတွက်ရေရှည် plasticity တစ်ခုတိုးမြှင် (လေ့လာတွေ့ရှိထားသည်Davis က et al ။ 2004), အသစ်အဆန်း hippocampal စိတ်လှုပ်ရှားအပေါ်သိသိသာသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိကြောင်းအကြံပြု။ ထို့ကြောင့်အသစ်အဆန်း (ယုန်အတွက် hippocampal လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမြင့်တက် inducesVinogradova 2001), ကြွက် (Jenkins et al ။ 2004), နှင့်လူသား (Tulving et al ။ 1996; ထူးဆန်းတဲ့နှင့် Dolan 2001) ။ ထို့အပွငျကအသစ်အဆန်းတုံ့ပြန်မှုစတင်ရန်ပုံပေါ်သော hippocampus မ VTA ဖြစ်ပါသည်: အဆိုပါကြောင်၏ hippocampus အတွက် Event-related အလားအလာ (Ruusurvita et al ။ 1995) နှင့်ကြွက် (Brankack et al ။ 1996) ကို hippocampus အဆိုပါ VTA ၏အသစ်အဆန်း-related ပစ်ခတ်ရန်ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းကဖော်ပြသည်။ Correspondingly, DA လွှတ်ပေးရေး (mouse ကို hippocampus အတွက်ဝတ္ထုလှုံ့ဆော်မှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်Ihalainen et al ။ 1999) နှင့် hippocampal အသစ်အဆန်းအချက်ပြမှုများ (လုပ်သူများ activated DA VTA အာရုံခံများ၏အရေအတွက်ကိုတိုးFloresco et al ။ 2003; သင်္ဘောသဖန်းသီး2နှင့် and3) .3) ။ hippocampus နှင့် VTA အကြားဒိုင်ယာလော့ခ်ရေရှည်သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မရှိမဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် VTA / hippocampus ဆားကစ်တစ်ခုအပြန်အလှန်အပြန်အလှန် (VTA DA လွှတ်ပေးရန်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ encoding ကဖွMizumori et al ။ 2004; Lisman နှင့်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း 2005; Wittmann et al ။ 2005; Adcock et al ။ 2006).
အဆိုပါ hippocampus အားဖြင့်အသစ်အဆန်း၏ processing, သို့သော် VTA ထက်အခြားအဆောက်အဦများကထောက်ခံလိမ့်မည်။ ဝတ္ထုအတှေ့အကွုံမှတုန့်ပြန်စည်းချက်ညီညီဥပမာ, noradrenergic LC မီးလောင်မှု (Sara et al ။ 1994) ။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံ၏ activation (hippocampal စိတ်လှုပ်ရှားပြောင်းလဲKitchigina et al ။ 1997) နှင့် (Synaptic plasticity နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သံပုရာ et al ။ 2009) ။ ဒါပေမယ့် LC နှင့် VTA အလုပ်လုပ်တဲ့နှင့်ခန္ဓာဗေဒနှစ်ဦးစလုံးအဆင့်ဆင့်အပေါ် interlinked နေကြသည်။ anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စနည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုပြီးတစ်ဦးကလေ့လာမှု LC နှင့် VTA ခန္ဓာဗေဒဆက်သွယ်မှု (ရှိသည်ပြသရှိမုနျကို et al ။ 1979) ။ အဆိုပါ VTA တိုက်ရိုက် LC မှစီမံကိန်းများနှင့် VTA နှင့် LC (အကြားတစ်ဦး feedforward connection ကိုညွှန်ပြ, အဲဒီမှာ DA လွှတ်ဖွယ်ရှိသည်Ornstein et al ။ 1987; Sara 2009) ။ ထို့အပြင် VTA (အလှည့်၌, အချိုမှုလွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် LC အာရုံခံလှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ, ထို DA လွှတ်ပေးရန်မှတဆင့် PFC activation သွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်Sara 2009), နှင့် VTA DA အာရုံခံ (အ LC ၏လျှပ်စစ်ဆွ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြန့်ချိကြောင်း noradrenaline မှတဆင့် modulated နေကြတယ်Grenhoff et al ။ 1993) ။ LC noradrenaline အာရုံခံခြင်းနှင့် VTA DA အာရုံခံ၏တွေ့ရှိရပါသည်လေ့လာမှုများ LC noradrenaline အာရုံခံခြင်းနှင့် VTA DA အာရုံခံ (အသီးသီးတို့သည် LC အတွက် VTA နှင့် noradrenaline အာရုံခံအတွင်းပစ်ခတ် DA အာရုံခံတခုတခုအပေါ်မှာ inhibitory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကွိုးစားအားထုကြောင်းအကြံပြုGuiard et al ။ 2008) ။ သို့သော် LC အတွက် prazosine အားဖြင့်α1-receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ်ကောင်းစွာ VTA DA အာရုံခံမှ LC noradrenaline အာရုံခံတစ်ခု excitatory အကျိုးသက်ရောက်မှုအကြံပြုသည် VTA အတွက်ပစ်ခတ် DA အာရုံခံဆဲလျအတွက်ကျဆင်းခြင်းထင်ရှား (Grenhoff နှင့် Svensson 1993) ။ ထို့ကြောင့် LC အဆိုပါ VTA နဲ့ရှုပ်ထွေးအလုပ်လုပ်တဲ့ပေးတဲ့ dialog များတွင်ပါဝင်နေသည်။
အဆိုပါ LC (နှစ်ဦးစလုံးVankov et al ။ 1995) နှင့် VTA (Schultz et al ။ 1993) အာရုံခံ (ကဖြည့်စွတ်ဖက်ရှင်အတွက်အချက်ပြသင်ယူခြင်းအဖြစ်သရုပ်ဆောင်, အသစ်အဆန်းများက activated နေကြတယ်Harley 2004) ။ ဝတ္ထုအတွေ့အကြုံကိုစတင်သောအခါ LC တက်ကြွချက်ချင်းဖြစ်လာသော်လည်း (Aston-ဂျုံးစ်နှင့် Bloom 1981; Sara et al ။ 1994), အ VTA (နောက်ပိုင်းမီလီစက္ကန်ရာပေါင်းများစွာအတွင်းတက်ကြွစွာဖြစ်လာLjungberg et al ။ 1992) ။ ဒါက LC, ဖြစ်စေတိုက်ရိုက်အဆိုပါ VTA နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး, သို့မဟုတ် hippocampus-VTA ကွင်းဆက်ကနေတဆင့်မှတဆင့်, အ hippocampus ဖို့ VTA ထံမှ DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ဒီဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အညီ, D1 / D5 receptors (LC ဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင်ကြောင်း hippocampal, LTD ထိန်းညှိတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သံပုရာ et al ။ 2009; သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2011) ။ ဒီနေရာမှာ D1 / D5 အဲဒီ receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း LC-CA1, LTD ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်တစ်ဦး D1 / D5 အဲဒီ receptor agonist ၏လျှောက်လွှာ 1 ဇကျော်ဘို့ကြာရှည်ခံကြောင်း, L-, LTD (သို့ LC-သွေးဆောင် CA24 E-, LTD နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2011; စားပှဲ 1B က) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် D1 / D5 အဲဒီ receptor စနစ်ကမသက်ဆိုင်သည့်အသစ်အဆန်း signal ကို (များ၏အရင်းအမြစ်၏အသစ်အဆန်းသို့မဟုတ်တိုးလာ arousal ၏အခြေအနေများအောက်တွင်သတင်းအချက်အလက်မြဲသိုလှောင်မှုအတွက်လိုအပ်သောတံခါးခုံကိုလျှော့ချဖို့တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းအကြံပြုသံပုရာနှင့် Manahan-Vaughan 2011).
D1 / D5 receptor Hippocampal သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်ဘို့မဏ္ဍိုင်များမှာ
လက်ရှိအသိပညာအပေါ်အခြေခံပြီးပြုလုပ် D1 / D5 receptors အဆိုပါ hippocampus အတွက်သတင်းအချက်အလက် encoding ကနှင့်သိုလှောင်မှုများပေးရန်အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်အဆုံးအဖြတ်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းရှင်းပါတယ်။ သူတို့ဟာ LTP နှင့်, LTD နှစ်ဦးစလုံး၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးလွယ်ကူချောမွေ့နှင့်အကောင့်သို့ LTP Spatial ကိုယ်စားပြု (၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့် encodes သောစုဆောင်းသက်သေအထောက်အထားယူနိုင်ပါတယ်Kemp နှင့် Manahan-Vaughan 2007, 2008a; Goh ကနှင့် Manahan-Vaughan 2012), ဒီ D1 / D5 receptors သဘောသဘာဝနှင့် hippocampus ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့အချက်အလက်များ၏အရည်အသွေးအကြောင်းအရာမောင်းနိုင်သောအကြံပြုထားသည်။ သိသိသာသာတစ်ဦး functional level ကိုပေါ်နှင့်ဤ postulate နှင့်အညီ, D1 / D5 အဲဒီ receptor activation (တိုက်ရိုက် entorhinal-CA3 input ကို၏အားနည်းချက်ငှါ, trisynaptic DG-CA1-CA1 circuit ကိုအတွင်းတိုးမြှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့မှဦးဆောင်Varela et al ။ 2009), အားဖြင့်မတိုက်ဆိုင်ထောက်လှမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုလျှော့ချ (Lismann နှင့် Otmakhova 2001) သတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုဦးစားပေး၏မျက်နှာသာအတွက်။ ဒီအလှည့်ဆုလာဘ်အတွေ့အကြုံများနှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်သိုလှောင်မှုနဲ့မှတ်ဉာဏ်၏နားချင်းဆက်မှီမြင့်မားသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
D1 / D5 အဲဒီ receptor activation hippocampus-မှီခို Episode နှင့် Spatial ရေရှည်မှတ်ဉာဏ် modulates အဲဒီဒေတာ D1 / D5 သည့်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဟာဦးနှောက်အတွက်တံခါးဝ hippocampal ရေရှည် plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ် receptors ကြောင်းညွှန်ပြလျက်, ဆွေးနွေးအတွက်အဓိကဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါလေ့လာတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူခေါ်ဆောင်သွား အဆိုပါ hippocampus အားဖြင့်လုပ်ငန်းများ၌ခံရသတင်းအချက်အလက်မှအသစ်အဆန်းများနှင့်ဆုလာဘ်၏ဂုဏ်သတ္တိများ။
ဤလုပ်ငန်းကိုဂျာမန်သုတေသနဖောင်ဒေးရှင်း (Deutsche Forschungsgemeinscaft ကနေထောက်ပံ့ကြေးကထောက်ခံသည်, www.dfg.de) Denise Manahan-Vaughan (Ma1843 / 6-2) ဖြစ်သည်။
အာဗြဟံသည် WC သည်ခရစ် BR, Logan B, Lawlor P ကို, အ hippocampus အတွက် heterosynaptic ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ဇွဲနဲ့ဆက်စပ် Dragunow အမ်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇစကားရပ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1994; 91: 10049-10053 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Adcock RA, Thangavel တစ်ဦးက, Whitfield-Gabrieli S က, Knutson B, Gabrieli JD ။ ဆုလာဘ်-လှုံ့ဆော်သင်ယူမှု: mesolimbic activation မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး precedes ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 50: 507-517 ။ [PubMed]
Andrzejewski ME, Spencer RC, ကယ်လီ AE ။ ဆာသင်ယူမှု, အလိုအလျောက်မော်တာအပြုအမူများနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအတွက် ventral နှင့် dorsal subicular dopamine D1 အဲဒီ receptor ပါဝင်ပတ်သက်မှု Dissociating ။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2006; 120: 542-553 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Aston-ဂျုံးစ်, G, Bloom FE ။ ကြွက်ပြပွဲပြုမူအတွက် Norepinephrine ပါဝင်သော locus coeruleus အာရုံခံ Non-noxious သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လှုံ့ဆော်မှုမှတုံ့ပြန်မှုအသံထှကျ။ J ကို neuroscience ။ 1981; 1: 887-900 ။ [PubMed]
Bach ME, Barad M က, သားတော် H ကို, Zhuo M က, Lu က YF, Shih R ကို, Mansuy ငါ Hawkins က RD, Kandel ER ။ Spatial မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာအသက်အရွယ်-related ချို့ယွင်းချက်စသည်တို့အတွက် hippocampal ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းကအဆင့်ချို့ယွင်းချက်ဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်နှင့်စခန်းအချက်ပြလမ်းကြောင်းတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့် attenuated နေကြသည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 5280-5285 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဘာရှားဇီ, Bortolotto ZA, ဒေးဗီးစ် CH, Berretta N ကို, Irving AJ, အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် AJ, Henley JM, ဂျိန်း DE, Watkins JC, Collingridge GL ။ အဆိုပါ hippocampus အတွက် LTP ၏ induction အချိုမှု metabotropic receptors ၏ Synaptic activation လိုအပ်ပါသည်။ သဘာဝ။ 1993; 363: 347-350 ။ [PubMed]
Barco တစ်ဦးက, Alarcon JM, Kandel ER ။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတက်ကြွ CREB ပရိုတိန်း၏ expression Synaptic ဖမ်းယူတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ cell ။ 2002; 108: 689-703 ။ [PubMed]
Baudry အမ် long-term အလားအလာနဲ့ Kindle: အလားတူထဲကဓာတုပစ်စညျးယန္တရားများ? Adv Neurol ။ 1986; 44: 401-410 ။ [PubMed]
MF သည်းခံကြ၏။ အဆိုပါနှောက် cortex အတွက်မှတ်ဥာဏ်သိုလှောင်မှုအတွက်တစ်ဦးက Synaptic အခြေခံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1996; 93: 13453-13459 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Beaulieu JM, Gainetdinov RR ။ အဆိုပါဇီဝြဖစ်စဉ်, အချက်ပြခြင်း, dopamine receptors ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacol ဗျာ 2011; 63: 182-217 ။ [PubMed]
Beckstead RM, Domesick vB, Nauta WJ ။ အဆိုပါ substantia nigra နှင့်ကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ၏ Efferent ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res ။ 1979; 175: 191-217 ။ [PubMed]
Bergson ကို C, Mrzljak L ကို, အပြုံးပုံ JF, Pappy M က, Levenson R ကို, Goldman-Rakic ​​ဆာ။ မျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ D1 နှင့် D5 dopamine receptors ၏ဖြန့်ဖြူးအတွက်ဒေသဆိုင်ရာဆယ်လူလာနှင့် subcellular များပါတယ်။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 7821-7836 ။ [PubMed]
ဘာနေဗျူး R ကို, Bevilaqua L ကို, Ardenghi P ကို, Bromberg အီး, Schmitz P ကို, Bianchin M က, Izquierdo ငါမက်ဒီနာ JH ။ ကြွက်များတွင်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသင်ယူမှုတစ်နှောင်းပိုင်းတွင်မှတ်ဉာဏ်စုစည်းပြီးအဆင့်လမ်းကြောင်းအချက်ပြ hippocampal စခန်း / Camp-မှီခိုပရိုတိန်း kinase ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1997; 94: 7041-7046 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Berridge MJ, Irvine RF ။ Inositol trisphosphate, ဆယ်လူလာ signal ကို transduction အတွက်ဝတ္ထုဒုတိယ messenger ကို။ သဘာဝ။ 1984; 312: 315-321 ။ [PubMed]
Bethus ငါစီ: D, မောရစ် RG ။ Dopamine နှင့်မှတ်ဉာဏ်: ဝတ္ထု hippocampal NMDA အဲဒီ receptor-မှီခိုတွဲအပေါင်းအသင်းများအတွက်မှတ်ဉာဏ်၏ဇွဲ၏မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 1610-1618 ။ [PubMed]
Bischoff က S, Scatton B က, ကြွက် hippocampus အတွက် dopamine တစ် transmitter ကိုအခန်းကဏ္ဍများအတွက် Korf ဂျေထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်သေအထောက်အထား။ ဦးနှောက် Res ။ 1979; 165: 161-165 ။ [PubMed]
Bliss တီဗီ, Collingridge GL ။ မှတ်ဉာဏ်တစ် Synaptic မော်ဒယ်: အ hippocampus အတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ။ 1993; 361: 31-39 ။ [PubMed]
Bliss တီဗီ, အဖောက်ထားလမ်းကြောင်းကို၏ anaesthetized ယုန်အောက်ပါဆွ၏ dentate ဧရိယာ၌ Synaptic ဂီယာ၏ Lomo တီ Long-ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ J ကို Physiol ။ 1973; 232: 331-356 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Brankack J ကို, Seidenbecher T က, Muller-GaÅNrtner HW ။ ကြွက်များကိုတွင် Task-သက်ဆိုင်ရာနှောင်းပိုင်းကအပြုသဘောအစိတ်အပိုင်း: က hippocampal theta ရစ်သမ်နှင့်ဆက်စပ်သောသလဲ? Hippocampus ။ 1996; 6: 475-482 ။ [PubMed]
Bromberg-မာတင် ES, Matsumoto က M, စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ် Hikosaka O. Dopamine: ဆုချီးဆန္ဒရှိနှင့်သတိပေးနခွေငျး။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2010; 68: 815-834 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Bunzeck N ကို, လူ့ substantia nigra / VTA အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအသစ်အဆန်း၏Düzelအီး Absolute နိုင်တဲ့ coding ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 51: 369-379 ။ [PubMed]
Burgess N ကို, Maguire EA, O'Keefe ဂျေလူ့ hippocampus နှင့် Spatial နှင့် episodicmemory ။ Neuron ။ 2002; 35: 625-641 ။ [PubMed]
Buzsáki, G, cortical ကွန်ရက်မှာ Draguhn အေအာရုံခံလှို။ သိပ္ပံ။ 2004; 304: 1926-1929 ။ [PubMed]
Carlsson တစ်ဦးက, Falck B, Hillarp NA ။ ဦးနှောက် monoamines ၏ဆယ်လူလာမူပြောင်းခြင်း။ Acta Physiol Scand ပျော့ပျောင်း။ 1962; 56: 1-28 ။ [PubMed]
Centonze: D, Grande ကို C, Saulle E ကိုမာတင် AB, Gubellini P ကို, PavoÅLn N ကို, Pisani တစ်ဦးက, ဘာနာ, G, Moratalla R ကို, မော်တာလှုပ်ရှားမှုနဲ့ striatal Synaptic plasticity အတွက် D1 နှင့် D5 dopamine receptors ၏ Calabresi P. ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ဍ။ J ကို neuroscience ။ 2003; 23: 8506-8512 ။ [PubMed]
Cepeda ကို C, Colwell CS, Itri ဖြစ်မှု, Chandler SH, Levine က MS ။ ကယ်လစီယမ်ကငျြ့အလှူငွေ: ချပ်ထဲမှာ neostriatal အာရုံခံအတွက် NMDA-သွေးဆောင်တပြင်လုံးကိုဆဲလ်ရေစီးကြောင်း၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ J ကို Neurophysiol ။ 1998; 79: 82-94 ။ [PubMed]
Cepeda ကို C, Levine က MS ။ သင်သွားကြသည်အဘယ်မှာထင်ပါသနည်း အဆိုပါ NMDA-D1 အဲဒီ receptor ထောင်ချောက်။ သိပ္ပံ STKE ။ 2006; 333: 20 ။ [PubMed]
Chen က Z ကို, Fujii S က, Ito ကငွေကျပ်, Kato H ကို, Kaneko K သည်, dopamine D1 receptors ၏ Miyakawa အိပ်ချ် Activation ကြွက် hippocampal CA1 အာရုံခံအတွက်အနိမ့်အကြိမ်ရေဆွခြင်းဖြင့်သွေးဆောင် Synaptic ဂီယာ၏ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါပိုကောင်းစေပါတယ်။ neuroscience လက်တ။ 1995; 188: 195-198 ။ [PubMed]
Chrobak JJ, Lórinczတစ်ဦးက, အ hippocampo-enthorinal cortex စနစ် Busaki G. အဇီဝပုံစံများ။ Hippocampus ။ 2000; 10: 457-465 ။ [PubMed]
Ciliax BJ, Nash N ကို, Heilman ကို C, Sunahara R ကို, Hartney တစ်ဦးက, Tiberi M က, ကောက် DB, caron MG, Niznik HB, Levey AI အ။ ကြွက်နှင့်မျောက်ဦးနှောက်ထဲမှာ Dopamine: D (5) အဲဒီ receptor immunolocalization ။ synapses ။ 2000; 37: 125-145 ။ [PubMed]
Clausen B, Schachtman TR, မာကု LT, Reinholdt M က, Christoffersen ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း။ ကြွက်များတွင်စနစ်တကျသို့မဟုတ် prelimbic D1-receptor ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းပြီးနောက်ရှာဖွေရေးနှင့်မှတ်ဉာဏ်၏ချို့ယွင်း။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2011; 223: 241-254 ။ [PubMed]
Cummings ကဂျာ Mulkey RM, Nicole RA, Malenka RC ။ Ca2 အဆိုပါ hippocampus အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်လိုအပ်ချက်များကိုအချက်ပြ + ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996; 16: 825-833 ။ [PubMed]
da Silva WC, Köhler CC ကို, Radiske တစ်ဦးက, Cammarota အမ် D1 / D5 dopamine receptors Spatial မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေး modulate ။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2012; 97: 271-275 ။ [PubMed]
Davis က CD ကို, ဂျုံးစ် FL, ဒါး BE ။ novel ပတ်ဝန်းကျင်မှာအဆိုပါ dentate gyrus အတွက်ရေရှည်အလားအလာများ induction နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုမြှင့်တင်ရန်။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 6497-6506 ။ [PubMed]
del Campos N ကို, Chamberlain SR, Sahakian BJ, Robbins TW ။ အာရုံစူးစိုက်မှု-လိုငွေပြမှု / hyperactivity ရောဂါ၏ pathophysiology နှင့်ကုသမှုအတွက် dopamine နဲ့ noradrenaline ၏အခန်းကဏ္ဍ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2011; 69: 145-157 ။ [PubMed]
Drolet P ကို, Bilodeau L ကို, Chorvatova တစ်ဦးက, Laflamme L ကို, Gallo ပြောတာကတော့-Payet N ကို, Payet MD ။ ကြွက် adrenal glomerulosa ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့ dopamine D2 အဲဒီ receptor အားဖြင့် T-type ကို Ca1 + လက်ရှိ၏တားစီး: ဂျီ betagamma ပရိုတိန်း subunit နှင့်သိသိ adenosine3'' ၏ပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ချက်လိုအပ်ချက်, 5'-monophosphate ။ Mol Endocrinol ။ 1997; 11: 503-514 ။ [PubMed]
Dudek သည် SM, ထမ်းရွက် MF ။ hippocampus နဲ့ N-methyl-D-aspartate အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဧရိယာ CA1 အတွက် Homosynaptic ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1992; 89: 4363-4367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Dunwiddie T က, ကြွက် hippocampus အတွက် Synaptic တုံ့ပြန်မှု၏ Lynch G. အ long-term အလားအလာများနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ: ပြည်တွင်းနှင့်ကြိမ်နှုန်းမှီခို။ J ကို Physiol ။ 1978; 276: 353-367 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ehringer H ကို, Hornykiewicz O. Verteilung ဗွန် Noradrenalin und Dopamin (3- Hydroxytryamin) im Gehirn des Menschen und ihr Verhalten Bei Erkrankungen des Extrapyramidalen စနစ်များ။ Klin Wochenschrift ။ 1960; 38: 1236-1239 ။
Eichenbaum H ကို, Stewart ကနေ C, မောရစ် RG ။ နေရာအရပ်သင်ယူမှုအတွက် Hippocampal ကိုယ်စားပြုမှု။ J ကို neuroscience ။ 1990; 10: 3531-3542 ။ [PubMed]
El-Ghundi M၊ Fletcher PJ, Drago J, Sibley DR, O'Dowd BF, George SR ။ dopamine: D (1) receptor နောက်ကောက်ကြွက်များတွင် Spatial သင်ယူမှုလိုငွေပြမှု။ Eur J ကို Pharmacol ။ 1999; 383: 95-106 ။ [PubMed]
အင်ဂျင်နီယာများ, E, Treit ဃစိုးရိမ်စိတ်အတွက် hippocampus များ၏အခန်းကဏ္ဍ: intracerebral ပြုတ်ရည်လေ့လာမှုများ။ ပြုမူနေ Pharmacol ။ 2007; 18: 365-374 ။ [PubMed]
Etkin တစ်ဦးက, Alarcón JM, Weisberg SP, Touzani K သည်, Huang က YY, Nordheim တစ်ဦးက, Kandel ER ။ SRF များအတွက်သင်ယူတစ်အခန်းကဏ္ဍ: ဖျက်မှုကိုအရွယ်ရောက်သူ forebrain အတွက်, LTD နှင့်ဝတ္ထုအခြေအနေတွင်၏ချက်ချင်းမှတ်ဉာဏ်၏ဖွဲ့စည်းခြင်း disrupts ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2006; 50: 127-143 ။ [PubMed]
Fitch TE, Sahr RN, Eastwood BJ, Zhou FC အသင်း, ယန် CR ။ Vivo အတွက်ထောင့်ဖြတ်တီးဝိုင်းတွင် neuron ၏ medial septal / ဒေါင်လိုက်ခြေလက်များတွင်ပစ်ခတ်မှုနှုန်းနှင့် bidirectional theta ပေါကျကှဲပစ်ခတ်၏ Dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ။ J ကို Neurophysiol ။ 2006; 95: 2808-2820 ။ [PubMed]
Fitzjohn သည် SM, Bortolotto ZA, Palmer က MJ, ဒိုဟာဆီ AJ, Ornstein PL, Schoepp DD, Kingston AE, Lodge: D, Collingridge GL ။ အဆိုပါအစွမ်းထက် mGlu အဲဒီ receptor ရန် LY341495 hippocampal Synaptic plasticity အတွက်နှစ်ဦးစလုံးပုံတူမျိုးပွားခြင်းနှင့်ဝတ္ထု mGlu receptors များအတွက်အခန်းကဏ္ဍသတ်မှတ်။ Neuropharmacology ။ 1998; 37: 1445-1458 ။ [PubMed]
Floresco SB, Todd CL, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ hippocampus ထံမှနျူကလိယမှ Glutamatergic afferents ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ၏လှုပ်ရှားမှုထိန်းညှိ accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2001; 21: 4915-4922 ။ [PubMed]
Floresco SB အနောက် AR, Ash ကို B ကို, Moore က H ကိုရေ့ AA ကို။ dopamine အာရုံခံဆဲလျပစ်ခတ်ရန်၏ Afferent မော်ဂျူ differential လုပ်သူများနှင့် phasic dopamine ဂီယာထိန်းညှိ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 968-973 ။ [PubMed]
Fluckiger အီး, Muller EE, Thorner MO ကို။ neuroscience ၏အခြေခံများနှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်။ နယူးယောက်: Springer-Verlag; 1987 ။
Fremeau RT ကို, Jr က Duncan က GE, Fornaretto MG, Dearry တစ်ဦးက, Gingrich ဂျာ Breese ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, caron MG ။ ဦးနှောက်ထဲမှာ D1 dopamine အဲဒီ receptor mRNA ၏ Localization dopaminergic neurotransmission ၏သိမြင်မှု, ထိခိုက်စေခြင်း, neuroendocrine ရှုထောင့်တစ်ဦးရဲ့အခန်းကဏ္ဍထောက်ခံပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1991; 88: 3772-3776 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Frey ဦး, Matthies H ကို, Reymann ကီလိုဂရမ်, Matthies အိပ်ချ်စသည်တို့အတွက်ကြွက် CA1 ဒေသအတွင်းရေရှည်အလားအလာဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါ tetanization စဉ်အတွင်း dopaminergic D1 အဲဒီ receptor ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ neuroscience လက်တ။ 1991; 129: 111-114 ။ [PubMed]
Frey ဦး, မောရစ် RG ။ Synaptic မှတ်သားခြင်းနှင့်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝ။ 1997; 385: 533-536 ။ [PubMed]
Frey ဦး, Schroeder H ကို, Matthies အိပ်ချ် Dopaminergic ရန်ကြွက် hippocampal ချပ်၏ CA1 ဒေသတွင်း၌ posttetanic LTP ၏ရေရှည်ထိန်းသိမ်းမှုတားဆီး။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 522: 69-75 ။ [PubMed]
Gangarossa, G, Di Benedetto M က, O`Sullivan GJ, Dunleavy M က, Alcacer ကို C, Bonito-Oliva တစ်ဦးက, Henshall, DC, Waddingtion JL, Valjent အီး, Fisone G. အတက်ခြင်း Zif1 အတွက် Erk-မှီခိုတိုးအတွက် dopamine D268 အဲဒီ receptor agonist ရလဒ်၏ဆေးများ mouse ကို dentate gyrus နှင့် Arc / Arg3.1 စကားရပ်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2011; 3: e19415 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Gangarossa, G, Longueville S က, De Bundel: D, Perroy J ကို, HerveÅL: D, Girault ဂျာ dopamine D1 နှင့်မောက် hippocampus အတွက် D2 အဲဒီ receptor-ဖော်ပြအာရုံခံ၏ Valjent အီးစရိုက်လက္ခဏာတွေ။ Hippocampus ။ 2012 Doi: 10.1002 / hipo.22044 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] [PubMed]
Gasbarri တစ်ဦးက, Packard တို့ MG, Campana အီး, Pacitti C. Anterograde နှင့်ကြွက်များတွင် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးဖို့ ventral tegmental ဧရိယာကနေစီမံကိန်းကို retrograde သဲလွန်စ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1994; 33: 445-452 ။ [PubMed]
Gasbarri တစ်ဦးက, ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးရေးဖွဲ့ထားပါတယ်တစ်ဦးက, Innocenzi R ကို, Pacitti ကို C, Brioni JD ။ ကြွက်များတွင် mesohippocampal dopaminergic စနစ်၏တွေ့ရှိရပါသည်အားဖြင့်သွေးဆောင် Spatial မှတ်ဉာဏ်ချွတ်ယွင်း။ neuroscience ။ 1996; 74: 1037-1044 ။ [PubMed]
Gasbarri တစ်ဦးက, ဇာတ်လမ်းဆင်ပြီးရေးဖွဲ့ထားပါတယ်တစ်ဦးက, Packard တို့ MG ။ ကြွက်များတွင် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးဖို့ dopaminergic mesencephalic စီမံကိန်းများ။ prog Neuropsychopharmacol Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1997; 21: 1-22 ။ [PubMed]
Goh က JJ, Manahan-Vaughan ဃ Spatial အရာဝတ္ထုအသိအမှတ်ပြုမှုမောက် hippocampus အတွက် LTP ကိုကနျ့သကြောင်း endogenous, LTD နိုင်ပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 2012; 23: 1118-1125 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Goodrich-Hunsaker NJ, Hunsaker MR, Kesner RP ။ အဆိုပါ dorsal hippocampus ငျဒသေ၏ interaction ကနှင့် dissociations: ဘယ်လို dentate gyrus, CA3 နှင့် CA1 ဖြစ်စဉ်ကို Spatial သတင်းအချက်အလက်။ ပြုမူနေ neuroscience ။ 2008; 122: 16-26 ။ [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ hippocampal-prefrontal cortical အပြန်အလှန်၏ Dopamine မော်ဂျူမှတ်ဉာဏ်-guided အပြုအမူမောင်း။ Cereb Cortex ။ 2008a; 18: 1407-1414 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ အဆိုပါ dopamine စနစ်နှင့် schizophrenia များ၏ pathophysiology: အခြေခံသိပ္ပံရှုထောင့်။ int ဗြာ Neurobiol ။ 2007; 78: 41-68 ။ [PubMed]
goto Y ကိုရေ့ AA ကို။ နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် Limbic နှင့် cortical သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2008b; 31: 552-558 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ schizophrenia များ၏ etiology များအတွက်အယူအဆ: လုပ်သူများ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့် dopamine system ကိုတုန့်ပြန်၏မော်ဂျူနှိုင်းယှဉ် Phasic ။ neuroscience ။ 1991; 41: 1-24 ။ [PubMed]
ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို, Floresco SB, Goto Y ကို, Lodge DJ သမား။ dopaminergic အာရုံခံခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူတွေကိုထိန်းချုပ်၏ပစ်ခတ်ရန်၏စည်းမျဉ်း။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 220-227 ။ [PubMed]
Granados N ကို, Ortiz အို Suarez LM မာတင် ED, Ceña V ကို, မြေဆီ JM, Moratalla R. D1 သော်လည်းမ dopamine receptors D5 အဆိုပါ hippocampus အတွက် LTP, Spatial သင်ယူမှုနှင့် LTP-သွေးဆောင်ကို arc နှင့် zif268 စကားရပ်များအတွက်အရေးပါဖြစ်ကြသည်။ Cereb Cortex ။ 2008; 18: 1-12 ။ [PubMed]
Grenhoff J ကို, Nisell M က, Ferré S က, Aston-ဂျုံးစ်, G, Svensson TH ။ ကြွက်များတွင် locus coeruleus ၏ဆွခြင်းဖြင့်ရူးနှမ်း midbrain dopamine ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်၏ Noradrenergic မော်ဂျူ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဂိုဏ်း။ 1993; 93: 11-25 ။ [PubMed]
Grenhoff J ကို, Svensson TH ။ Prazosin ကြွက် ventral tegmental ဧရိယာ၌ dopamine အာရုံခံ၏ပစ်ခတ်ရန်ပုံစံ modulates ။ EUR J ကို Pharmacol ။ 1993; 233: 79-84 ။ [PubMed]
Gruber AJ, Hussain RJ, O'Donnell P. အဆိုပါနျူကလိယ accumbens: ရည်မှန်းချက် - အပြုအမူများအတွက် switchboard ။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2009; 4: e5062 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Guiard ကို BP, အယ်လ် Mansari M က, Merali Z ကို, dopamine, serotonin နဲ့ norepinephrine အာရုံခံအကြား Blier P. Functional interaction က: monoaminergic ကိုတွေ့ရှိရပါသည်နှင့်အတူကြွက်အတွက် In-Vivo electrophysiological လေ့လာမှု။ int J ကို Neuropsychopharmacol ။ 2008; 11: 625-639 ။ [PubMed]
Guzowski JF, McNaughton BL, Barnes, CA, Worley PF ။ hippocampal အာရုံခံ ensembles အတွက်ချက်ချင်း-အစောပိုင်းဗီဇ Arc ၏ပတ်ဝန်းကျင်-တိကျတဲ့စကားရပ်။ နတ် neuroscience ။ 1999; 2: 1120-1124 ။ [PubMed]
Hagena H ကို, CA3 Mossi ဖိုင်ဘာနှင့် commissural-Associates synapses မှာ Manahan-Vaughan ဃသင်ယူ-facilitated Synaptic plasticity သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောအခန်းကဏ္ဍဖော်ပြသည်။ Cereb Cortex ။ 2011; 21: 2442-2449 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Hamilton ကတီဂျေ, Wheatley BM, Sinclair DB, Bachmann M က, Larkum ME, Colmers WF ။ Dopamine ကြွက်နှင့်လူ့ dentate granules ဆဲလ် dendrites အတွက် Synaptic plasticity modulates ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010; 107: 18185-18190 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harley CW ။ သင်ယူမှုအချက်ပြမှုများအဖြစ် Norepinephrine နှင့် dopamine ။ အာရုံကြော Plast ။ 2004; 11: 191-204 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Harris က KM, Kater SB ။ Dendritic ကျောရိုး: ဆယ်လူလာ Special Synaptic function ကိုမှတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှစ်ဦးစလုံးပေးခြင်း။ Annu ဗြာ neuroscience ။ 1994; 17: 341-371 ။ [PubMed]
Heinemann ဦး, Beck H ကို, Dreier JP, Ficker အီး, Stabel J ကို, Zhang က CL ။ epileptiform လှုပ်ရှားမှုများ၏ဝါဒဖြန့်ဘို့တစ်စညျးမဉျြးစညျးကမျးတံခါးဝအဖြစ် dentate gyrus ။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ Res ပျော့ပျောင်း။ 1992; 7: 273-280 ။ [PubMed]
Hölscher C. အချိန်, နေရာနှင့် hippocampal လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဗြာ neuroscience ။ 2003; 14: 253-284 ။ [PubMed]
horn AS, Korf J ကို, Westerrink BHC ။ dopamine ၏ neurobiology ။ ဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့: ပညာရေးဆိုင်ရာစာနယ်ဇင်း; 1979 ။
လင်းမြို့တွင် JG, Taepavarapruk P ကို, Phillips က AG က။ ကြွက်များတွင် amygdala ၏, basolateral, ဒါပေမယ့်အလယ်ပိုင်းမဟုတ်နျူကလိယအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine efflux ၏အချိုမှု receptor-မှီခိုမော်ဂျူ။ J ကို neuroscience ။ 2002; 22: 1137-1145 ။ [PubMed]
Huang က YY, Kandel ER ။ D1 / D5 အဲဒီ receptor agonists အဆိုပါ hippocampus ၏ CA1 ဒေသအတွက်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်-မှီခိုနှောင်းပိုင်းတွင်အလားအလာသွေးဆောင်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1995; 92: 2446-2450 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ihalainen ဂျာ Riekkinen P ကို, Jr က Feenstra MG ။ microdialysis သုံးပြီး mouse ကို prefrontal cortex, striatum နှင့် hippocampus အတွက် dopamine နဲ့ noradrenaline လွှတ်ပေးရန်၏နှိုင်းယှဉ်။ neuroscience လက်တ။ 1999; 277: 71-74 ။ [PubMed]
Ito က HT, Schuman EM ။ dopamine အားဖြင့် Synaptic ဂီယာနှင့် plasticity ၏ frequency-မှီခို Gates ။ တပ်ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Circuits ။ 2007; 1: 1 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ito က R ကို, နျူကလိယ၏အခန်းကဏ္ဍအတိုက်အခံ Hayen အေ limbic သတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့၏မော်ဂျူအတွက် core နဲ့ shell ကို dopamine accumbens ။ J ကို neuroscience ။ 2011; 31: 6001-6007 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ဂျေး TM အလိုအလျောက်။ Dopamine: Synaptic plasticity နှင့်မှတ်ဉာဏ်ယန္တရားများများအတွက်အလားအလာအလွှာဟာ။ prog Neurobiol ။ 2003; 69: 375-390 ။ [PubMed]
Jenkins က TA, အီဒီအာမင်အီး, Pearce JM, Brown ကမီဂါဝပ်, Aggleton JP ။ တစ်ဦးက c-fos စကားရပ်လေ့လာမှု: အကျွမ်းတဝင်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှု၏ဝတ္ထု Spatial အစီအစဉ်များအတွက် parahippocampal cortical ကြွက် hippocampal ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်လှုပ်ရှားမှုမြှင့်တင်ရန်ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး။ neuroscience ။ 2004; 124: 43-52 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ် EG ။ GABAergic အာရုံခံခြင်းနှင့်မျောက်ဝံများအတွက် cortical plasticity ၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍ။ Cereb Cortex ။ 1993; 3: 361-372 ။ [PubMed]
ဂျုံးစ်မဂ္ဂါဝပ်, Errington ML, ပြင်သစ် PJ, Fine တစ်ဦးက, Bliss တီဗီ, Garel S က, Charnay P ကို, Bozon B, Laroche က S, Davis ကအက်စ်နှောင်းပိုင်းတွင် LTP နှင့်ရေရှည်မှတ်ဥာဏ်၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအတွက်ချက်ချင်းအစောပိုင်းဗီဇ Zif268 များအတွက်လိုအပ်ချက်။ နတ် neuroscience ။ 2001; 4: 289-296 ။ [PubMed]
Jürgensen S ကိုအန်တိုနီယို ll, Mussi GE, Brito-Moreira J ကို, Bomfim TR, De Felice အပြည်ပြည်သွား, Garrido-Sanabria ER, Cavalheiro EA, Ferreira ST ။ D1 / D5 dopamine receptors ၏ activation amyloid-beta ကို oligomers အားဖြင့်သွေးဆောင် synapses ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေအာရုံခံကာကွယ်ပေးသည်။ J ကို Biol Chem ။ 2011; 286: 3270-3276 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ရင့်ကျက်လှသည့် hippocampus တွင် ERK ကိုသက်ဝင်လှုပ်ရှားစေပြီး Synaptic စိတ်ကျရောဂါကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့် NMDA-receptor ကို Kaphzan H၊ O'Riordan KJ, Mangan KP, Levenson JM, Rosenblum K. NMDA နှင့် dopamine တို့သည်ပေါင်းစပ်လိုက်သည်။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2006; 1: e138 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kauderer BS, အဲရစ် R. Kandel ။ ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါတစ်ခုပရိုတိန်းပေါင်းစပ်-မှီခိုအစိတ်အပိုင်း၏ဖမ်းယူခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2000; 97: 13342-13347 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kemp တစ်ဦးက, Manahan-Vaughan ဃ Beta ကို-adrenoreceptors သင်ယူမှု-facilitated ရေရှည် plasticity အတွက်အရေးပါသောဒြပ်စင်ပါဝင်သည်။ Cereb Cortex ။ 2008b; 18: 1326-1334 ။ [PubMed]
Kemp တစ်ဦးက, Manahan-Vaughan ဃ hippocampal CA1 ဒေသနှင့် dentate gyrus ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတဆင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် Spatial အင်္ဂါရပ် encoding ကများအကြားခွဲခြား။ Cereb Cortex ။ 2008a; 18: 968-977 ။ [PubMed]
Kemp တစ်ဦးက, Manahan-Vaughan ဃ Hippocampal ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ရေရှည်အလားအလာအန်ကုက်လုပ်အသစ်အဆန်းဝယ်ယူ၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2004; 101: 8192-8197 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kemp တစ်ဦးက, Manahan-Vaughan ဃ Hippocampal ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ: declarative ဟူ. မှတ်ဉာဏ်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်မာစတာသို့မဟုတ် minions ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2007; 30: 111-118 ။ [PubMed]
Kesner RP, Gilbert က PE, Wallenstein GV ။ အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်တွေနဲ့မှတ်ဉာဏ်၏အာရုံကြောကွန်ယက်ကိုမော်ဒယ်များစမ်းသပ်။ Curr Opin Neurobiol ။ 2000; 10: 260-265 ။ [PubMed]
Khan က zu, Gutierrez တစ်ဦးကမာတင် R ကို, Peñafielတစ်ဦးက, Rivera တစ်ဦးက, ကြွက်နှင့်လူ့ဦးနှောက်၏ de la Calle အေ Dopamine D5 receptors ။ neuroscience ။ 2000; 100: 689-699 ။ [PubMed]
Kitchigina V ကို, Vankov တစ်ဦးက, Harley ကို C, Sara SJ ။ အဆိုပါ dentate gyrus အတွက်စိတ်လှုပ်ရှား၏အသစ်အဆန်း-ရူးနှမ်း, noradrenaline-မှီခိုတိုးမြှင့်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1997; 9: 41-47 ။ [PubMed]
Kulla တစ်ဦးက, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ dentate gyrus အတွက် Manahan-Vaughan ဃ Depotentiation D1 / D5 dopamine receptors အားဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 614-620 ။ [PubMed]
Kulla တစ်ဦးက, Manahan-Vaughan ဃ Modulation လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျား၏ dentate gyrus အတွက် depotentiation ၏အုပ်စု 1 metabotropic အချိုမှု receptors ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Hippocampus ။ 2008; 18: 48-54 ။ [PubMed]
Kulla တစ်ဦးက, depotentiation ၏ Manahan-Vaughan ဃစည်းမျဉ်းဥပဒေနှင့်အလွတ်လပ်စွာ dopamine D2 ကဲ့သို့ receptors အားဖြင့်ကြွက်ရွေ့လျား၏ dentate gyrus အတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။ Cereb Cortex ။ 2003; 13: 123-135 ။ [PubMed]
Kulla တစ်ဦးက, Reymann ကီလိုဂရမ်, လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များ၏ dentate gyrus အတွက် depotentiation ၏ Manahan-Vaughan ဃအချိန်-မှီခိုသော induction: အုပ်စုကို2metabotropic အချိုမှု receptors ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ EUR J ကို neuroscience ။ 1999; 11: 3864-3872 ။ [PubMed]
Kullmann DM, Asztely က F, Walker က MC ။ Synaptic plasticity အတွက်နို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေ ionotropic receptors ၏အခန်းကဏ္ဍကို: LTP, LTD မှနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ။ cell Mol ဘဝကသိပ္ပံ။ 2000; 57: 1551-1561 ။ [PubMed]
Kumar က U, Patel က SC ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ ဦး နှောက်တွင် dopamine receptor အမျိုးအစားများ (D1R-D5R) ၏ Immunohistochemical မူပြောင်းခြင်း။ Brain Res ။ 2007; 1131: 187-196 ။ [PubMed]
Kuo က AG က, Lee က, G, Disterhoft JF ။ နှစ်ခု hippocampus-မှီခိုတာဝန်များကိုအပေါ်တစ်ပြိုင်နက်လေ့ကျင့်ရေးသဲလွန်စ eyeblink အေးစက်၏ဝယ်ယူနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006; 13: 201-207 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Kusuki T က, Imahori Y ကို, Ueda က S, နဂိုအတိုင်းဦးနှောက်၏ dentate gyrus အတွက် LTP သော induction ၏ Inokuchi K. Dopaminergic မော်ဂျူ။ Neuroreport ။ 1997; 8: 2037-2040 ။ [PubMed]
Lee ကဟောင်ကောင်, Kameyama K ကို Huganir RL, ထမ်းရွက် MF ။ NMDA ရေရှည် Synaptic စိတ်ကျရောဂါနှင့် hippocampus အတွက် AMPA receptors ၏ GluR1 subunit ၏ dephosphorylation ဖြစ်ပေါ်သည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1998; 21: 1151-1162 ။ [PubMed]
Lee ကငါ Rao က, G, Knierim JJ ။ hippocampal subfields အကြားတစ်ဦးကနှစ်ဆ dissociation: အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အ CA3 နှင့် CA1 ရာအရပျဆဲလ် differential ကိုအချိန်သင်တန်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောင်းလဲသွားတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2004; 42: 803-815 ။ [PubMed]
Legault M က, Rompré PP, ပညာရှိ RA ။ အဆိုပါ ventral hippocampus ၏ဓာတုဆွနျူကလိယဟာ ventral tegmental ဧရိယာ၏ dopaminergic အာရုံခံသက်ဝင်ခြင်းဖြင့် dopamine accumbens elevates ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 1635-1642 ။ [PubMed]
Legault M က, ပညာရှိ RA ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာအတွင်းရှိ ventralsubiculum ထံမှချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့စီးဆင်းမှုနှင့် glutamatergic neurotransmission အပေါ်မှီခို: နျူကလိယ၏အသစ်အဆန်း-evoked မြင့်တက် dopamine accumbens ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2001; 13: 819-828 ။ [PubMed]
သံပုရာ N ကို, Aydin-တူနီးရှားတွင် S က, funk K ကို Manahan-Vaughan ဃ Locus coeruleus activation မှတ်ဉာဏ် encoding ကနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်နှင့် beta ကို-adrenergic အဲဒီ receptor activation အပေါ်မူတည်ကြောင်း hippocampal, LTD ဖြစ်ပေါ်သည်။ Cereb Cortex ။ 2009; 19: 2827-2837 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သံပုရာ N ကို, Manahan-Vaughan ဃ Dopamine D1 / D5 receptors ဝတ္ထု Spatial တူးဖော်ရေးသို့မဟုတ် locus coeruleus လှုပ်ရှားမှုကကမကထပြုခဲ့က de Novo hippocampal, LTD မှကူညီသည်။ Cereb Cortex ။ 2011; 22: 2131-2138 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
သံပုရာ N ကို, Manahan-Vaughan ဃ Dopamine D1 / D5 တံခါးဝ hippocampal ရေရှည်အလားအလာများနှင့်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါမှတစ်ဆင့်ဝတ္ထုအချက်အလက်များ၏ဝယ်ယူ receptors ။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 7723-7729 ။ [PubMed]
လီက S, Cullen က wk, Anwyl R ကို, Rowan MJ ။ Spatial အသစ်အဆန်းမှထိတွေ့မှုအားဖြင့် hippocampal CA1 အတွက် LTP သော induction ၏ Dopamine-မှီခိုပံ့ပိုးကူညီ။ နတ် neuroscience ။ 2003; 6: 526-531 ။ [PubMed]
Lisman J ကိုရေ့ AA ကို, Episode မှတ်ဉာဏ်အဘို့အ Duzel အီးတစ်ဦးကလက်သစ် Hebbian မူဘောင်; dopamine-မှီခိုနှောင်းပိုင်းတွင် LTP ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2011; 34: 536-547 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lisman je, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ အဆိုပါ hippocampal-VTA ကွင်းဆက်: ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သို့အချက်အလက်များ၏ entry ကိုထိန်းချုပ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 46: 703-713 ။ [PubMed]
Lisman je, Otmakhova NA ။ သိုလှောင်ခြင်း, ပြန်လည်သိမ်းဆည်း, နှင့် hippocampus ဖွငျ့ပာ၏အသစ်အဆန်းထောက်လှမ်း: dopamine ၏ပုံမှန်နှင့်ထစ်အငေါ့သက်ရောက်မှုများအတွက်အကောင့်ဖို့ဆိုကရေးတီးမော်ဒယ်ပေါ်သွားမယ်လို့။ Hippocampus ။ 2001; 11: 551-568 ။ [PubMed]
လျူက F, ဝမ်မေး, Pristupa ZB, ယု XM, ဝမ် YT, Niznik HB ။ တိုက်ရိုက်ပရိုတိန်း-ပရိုတိန်းနားချင်းဆက်မှီ dopamine D5 နှင့် gamma-aminobutyric အက်ဆစ်တစ်ဦးက receptors အကြား Cross-ဆွေးနွေးချက်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝ။ 2000; 403: 274-280 ။ [PubMed]
လျူ J ကို, ဝမ် W က, ဝမ်က F, Cai က F, Hu ZL, ယန် YJ, Chen က J ကို, ချန် JG ။ Phosphatidylinositol-နှင့်ဆက်စပ်ဝတ္ထု: D (1) dopamine အဲဒီ receptor ကြွက် hippocampal CA1 synapses အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါနိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ Neuropharmacology ။ 2009; 57: 164-171 ။ [PubMed]
Ljungberg T က, Apicella P ကို, အမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုများလေ့လာသင်ယူနေစဉ်အတွင်းမျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Schultz ဒဗလျူတုံ့ပြန်ချက်။ J ကို Neurophysiol ။ 1992; 67: 145-163 ။ [PubMed]
Lodge DJ သမား, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်း AA ကို။ dopamine စနစ်က function ကိုနှင့် schizophrenia များ၏ pathophysiology ၏ Hippocampal dysregulation ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Pharmacol သိပ္ပံ။ 2011; 32: 507-513 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Madronal N ကို, Gruart တစ်ဦးက, Delgado-GarciÅLa JM ။ ကြွက်ပြုမူအတွက် LTP နှင့်ဖွဲ့စည်းသင်ယူမှုမှ presynaptic ပံ့ပိုးမှုများကိုမတူညီသော။ တပ်ဦးစှာနထေိုငျ neuroscience ။ 2009; 3:7။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Malenka RC, Kauer ဂျာ Perkel DJ သမား, မောက် MD, ကယ်လီ PT, Nicole RA, Waxham MN ။ ရေရှည်အလားအလာအတွက် postsynaptic calmodulin နှင့်ပရိုတိန်း kinase လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သဘာဝ။ 1989; 340: 554-557 ။ [PubMed]
Manahan-Vaughan ဃ Group မှ 1 နှင့်2metabotropic အချိုမှု receptors hippocampal ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါနှင့်လွတ်လပ်စွာကြွက်ရွေ့လျားအတွက်ရေရှည်အလားအလာအတွက် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍကစား။ J ကို neuroscience ။ 1997; 17: 3303-3311 ။ [PubMed]
လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေ့လျားကြွက်များတွင် Manahan-Vaughan ဃ long-term စိတ်ကျရောဂါ strain အပြောင်းအလဲ, induction protocol ကိုများနှင့်အမူအကျင့်ပြည်နယ်အပေါ်သို့မှီခိုသည်။ Cereb Cortex ။ 2000; 10: 482-487 ။ [PubMed]
Manahan-Vaughan: D, Braunewell KH ။ အသစ်အဆန်းဝယ်ယူ hippocampal ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏ induction နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1999; 96: 8739-8744 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Matthies H ကို, Becker ကတစ်ဦး, Schröder H ကို, Kraus J ကို, Höllt V ကို, Krug အမ် Dopamine D1-လစ်လပ် Mutant ကြွက် hippocampal ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့်ဖော်ပြကြပါဘူး။ Neuroreport ။ 1997; 8: 3533-3535 ။ [PubMed]
မိုင် R ကို, Tóth K ကိုGulyás AI အ, Hájos N ကို, Freund TF ။ အဆိုပါ hippocampus အတွက် somatic နှင့် dendritic တားစီးအကြားကွာခြားချက်များ။ အာရုံခံဆဲလျ။ 1996; 16: 815-823 ။ [PubMed]
Mishkin M က, Vargha-Khadem က F, Gadian DG ။ သတိမေ့ခြင်းနှင့် hippocampal စနစ်၏အဖွဲ့အစည်းက။ Hippocampus ။ 1998; 8: 212-216 ။ [PubMed]
Mizumori SJ, Yeshenko အို Gill KM, Davis က DM ။ အာရုံကြောစနစ်များကိုဖြတ်ပြီးစင်ပြိုင်အပြောင်းအလဲနဲ့: တစ်မျိုးစုံမှတ်ဉာဏ်စနစ်အတွက်အယူအဆများအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2004; 82: 278-298 ။ [PubMed]
Mockett BG, Guévremont: D, Williams က JM, အာဗြဟံ WC ။ Dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor activation ကြွက် hippocampus အတွက် NMDA အဲဒီ receptor-မှီခိုရေရှည်စိတ်ကျရောဂါနောက်ကြောင်းပြန်။ J ကို neuroscience ။ 2007; 27: 2918-2926 ။ [PubMed]
Moncada: D, Ballarini က F, Martinez MC, Frey Ju, transmitter ကိုစနစ်များ Viola အိပ်ချ်သတ်မှတ်ချက်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းအမူအကျင့်မှတ်သားခြင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက် tag ကိုမော်လီကျူးသင်ယူခြင်း။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2011; 108: 12931-12936 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Moudy လေး, Kunkel DD, Schwartzkroin PA ဆိုပြီး။ ကြွက် hippocampus ၏ dopamine-betahydroxylase-အပြုသဘောဖိုင်ဘာ innervation ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ။ synapses ။ 1993; 15: 307-318 ။ [PubMed]
Mulkey RM, Herron အီး, Malenka RC ။ hippocampal ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအတွက်ပရိုတိန်း phosphatases များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ သိပ္ပံ။ 1993; 261: 1051-1055 ။ [PubMed]
Navakkode S က, Sajikumar S က, Frey Ju ။ စသည်တို့အတွက်ကြွက် CA1 ၏ hippocampal ချပ်ထဲမှာ dopaminergic D5 / D1-receptor-mediated LTP ၏ induction အဘို့အများ၏ညှိနှိုင်းလိုအပ်ချက်များကို။ Neuropharmacology ။ 2007; 52: 1547-1554 ။ [PubMed]
Navakkode S က, Sajikumar S က, Sacktor TC, Frey Ju ။ ပရိုတိန်း kinase Mzeta apical CA1 dendrites အတွက် dopamine-သွေးဆောင်ရေရှည်အလားအလာများ induction နှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2010; 17: 605-611 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ငုယင်မှာ PV, အာဗေလသည် T, Kandel ER ။ LTP တစ်နှောင်းပိုင်းတွင်အဆင့် induction များအတွက်ကူးယူ၏အရေးပါသောကာလ၏လိုအပ်ချက်။ သိပ္ပံ။ 1994; 265: 1104-1107 ။ [PubMed]
O'Carroll CM, Martin SJ, Sandin J, Frenguelli B, Morris RG တ ဦး တည်း - ရုံးတင်စစ်ဆေး hippocampus- မှီခိုမှတ်ဉာဏ်၏ဇွဲ၏ Dopaminergic မော်ဂျူ။ Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2006; 13: 760-769 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ornstein K ကို Milon H ကို, McRae-Degueurce တစ်ဦးက, Alvarez ကို C, Berger B, Würzner HP က။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာထဲမှအဆိုပါ locus coeruleus ၏ dopaminergic afferents အဘို့ထဲကဓာတုပစ်စညျးမြားနှငျ့ radioautographic သက်သေအထောက်အထား။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 1987; 70: 183-191 ။ [PubMed]
Ortiz အို Delgado-Garcia JM, Espadas ငါBahíတစ်ဦးက, Trullas R ကို, Dreyer JL, Gruart တစ်ဦးက, Moratalla R. Associative သင်ယူမှုနှင့် CA3-CA1 Synaptic plasticity Drd1a, D1R တရားမဝင်သောအတွက်ချို့ယွင်းကြသည် - / - ကြွက်နှင့်အသံတိတ် hippocampal siRNA အတွက် Drd1a ကြွက်။ J ကို neuroscience ။ 2010; 30: 12288-12300 ။ [PubMed]
Otmakhova NA, Lisman je ။ D1 / D5 dopamine အဲဒီ receptor activation CA1 hippocampal synapses မှာအစောပိုင်းရေရှည်အလားအလာများ၏ပြင်းအားတိုးပွားစေပါသည်။ J ကို neuroscience ။ 1996; 16: 7478-7486 ။ [PubMed]
Otmakhova NA, Lisman je ။ D1 / D5 dopamine receptors စခန်း-မှီခိုယန္တရားကနေတဆင့် CA1 synapses မှာ depotentiation တားစီး။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1270-1279 ။ [PubMed]
Parvez S က, Ramachandran B, Frey Ju ။ စသည်တို့အတွက် hippocampal CA1 အာရုံခံ၏ apical dendrites အတွက်တဦးတည်း Synaptic input ကိုအတွက်ရေရှည်အလားအလာနှင့် / သို့မဟုတ်စိတ်ကျရောဂါ၏နောက်ဆက်တွဲသော induction ၏ Properties ကို။ neuroscience ။ 2010; 171: 712-720 ။ [PubMed]
Pennartz CM, Ito က R ကို, Verschure PF, Battaglia လက်ဗွေ, Robbins TW ။ သင်ယူမှု, ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက် hippocampal striatal ဝင်ရိုး။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2011; 34: 548-559 ။ [PubMed]
Popkirov စင်ကာပူဒေါ်လာ, CA5 synapses အတွက် NMDA အဲဒီ receptor-မှီခို, သင်ယူမှု-facilitated ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါအတွက် metabotropic အချိုမှု receptor mGluR1 ၏ Manahan-Vaughan ဃပါဝင်ပတ်သက်မှု။ Cereb Cortex ။ 2011; 21: 501-509 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Roggenhofer အီး, Fidzinski P ကို, Bartsch J ကို, Kurz က F, Shor အဘိဓါန်အို dopamine D1 / D5 receptors ၏ Behr ဂျေ Activation hippocampal output ကို synapses မှာ presynaptic ရေရှည်အလားအလာများ induction နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်။ EUR J ကို neuroscience ။ 2010; 32: 598-605 ။ [PubMed]
Rossato JI, Bevilaqua LR, Izquierdo ငါမက်ဒီနာ JH, Cammarota အမ် Dopamine ရေရှည်မှတ်ဉာဏ်သိုလှောင်မှုဇွဲကိုထိန်းချုပ်ထား။ သိပ္ပံ။ 2009; 325: 1017-1020 ။ [PubMed]
ရိုင်ယန်ဟာ MM, ရိုင်ယန်ခ, Kyrke-Smith က M ကို, Logan B, တိတ် WP, အာဗြဟံ WC, Williams က JM ။ Vivo အတွက်ရေရှည်အလားအလာများ၏နှောင်းပိုင်းကအဆင့်နဲ့ဆက်စပ်ဗီဇကွန်ရက်ယာယီကို။ PLoS တစ်ခုမှာ။ 2012; 7: e40538 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
စမ်းသပ်မှု II ကို: တစ်ဦးခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွဟာကြောင်တစ်ကောင်အတွက် deviant တန်ချိန်နှင့်အတူတွဲသောအခါ Ruusuvirta T က, Korhonen T က, Penttonen M က, Arikoski J ကို, Kivirikko K. အပြုအမူနှင့် hippocampal တစ်ခုအာရုံ oddball အခြေအနေမှာတုံ့ပြန်မှု evoked ။ int J ကို Psychophysiol ။ 1995; 20: 41-47 ။ [PubMed]
Sajikumar S က, Frey Ju ။ Anisomycin စသည်တို့အတွက်ကြွက် hippocampal ချပ်အတွက်ရေရှည်စိတ်ကျရောဂါ၏နှောင်းပိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ neuroscience လက်တ။ 2003; 338: 147-150 ။ [PubMed]
Sajikumar S က, Frey Ju ။ နှောင်းပိုင်းတွင်-Association, Synaptic မှတ်သားခြင်းနှင့် LTP နှင့်, LTD စဉ်အတွင်း dopamine ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ။ 2004; 82: 12-25 ။ [PubMed]
Sara SJ ။ အဆိုပါ locus coeruleus နှင့်သိမှတ်ခံစားမှု၏ noradrenergic မော်ဂျူ။ နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2009; 10: 211-223 ။ [PubMed]
Sara SJ, Vankov တစ်ဦးက, ကြွက်ပြုမူအတွက်HerveÅLအေ Locus coeruleus-evoked တုံ့ပြန်မှု: မှတ်ဉာဏ်အတွက် noradrenaline ၏အခန်းကဏ္ဍကိုဖို့သဲလွန်စ။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1994; 35: 457-465 ။ [PubMed]
ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအပြောင်းအလဲများနှင့်မျိုးဗီဇမှဦးဆောင် Sarantis K သည်, Antony K ကို Matsokis N ကို, ဝတ္ထုပတ်ဝန်းကျင်ကို Angelatou အက်ဖ် Exposure အဖန်ဖန် phosphorylation အားဖြင့်မျဉ်းသား D1 / NMDA receptors တစ်ခုအပြန်အလှန်အားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်သူ NMDA နှင့် AMPA အဲဒီ receptor subunits နှင့် ERK1 /2အချက်ပြ၏ activation, ကြွက် hippocampus အတွက်စကားရပ်။ Neurochem Int ။ 2012; 60: 57-67 ။ [PubMed]
Scatton B ကရှိမုန် H ကို, Le Moal က M, Bischoff အက်စ်မူလအစဟာကြွက် hippocampal ဖွဲ့စည်းခြင်း၏ dopaminergic innervation ၏။ neuroscience လက်တ။ 1980; 18: 125-131 ။ [PubMed]
Schott BH, Seidenbecher CI, Fenker DB, Lauer CJ, Bunzeck N ကို, Bernstein HG, Tischmeyer W က, Gundelfinger ED, Heinz HJ, Düzelအီးအဆိုပါ dopaminergic midbrain လူ့ Episode မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအတွက်ပါဝင်: မျိုးရိုးဗီဇပုံရိပ်ကနေသက်သေအထောက်အထား။ J ကို neuroscience ။ 2006; 26: 1407-1417 ။ [PubMed]
Schultz W က, Apicella P ကို, မျောက် dopamine အာရုံခံ၏ Ljungberg တီတုံ့ပြန်ချက်တခုနှောင့်နှေးတုန့်ပြန်တာဝန်သင်ယူခြင်း၏အဆက်ဆက်ခြေလှမ်းများစဉ်အတွင်းဆုချခြင်းနှင့်အေးစက်လှုံ့ဆော်မှုရန်။ J ကို neuroscience ။ 1993; 13: 900-913 ။ [PubMed]
Seaman JK, Floresco SB, Phillips က AG က။ ကြွက်များတွင်အလုပ်အမှုဆောင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူ Spatial မှတ်ဉာဏ်ကိုပေါင်းစပ် hippocampal-prefrontal cortical ဆားကစ်၏ D1 အဲဒီ receptor မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience ။ 1998; 18: 1613-1621 ။ [PubMed]
ကားရှိမုနျ H ကို, Le Moal က M, Stinus L ကို, anterograde နှင့် retrograde သဲလွန်စနည်းစနစ်အားဖြင့်သရုပ်ပြအဖြစ် ventral mesencephalic tegmentum-တစ် 10 ဒေသနှင့် locus coeruleus အကြား Cala အေ Anatomical ဆက်ဆံရေး။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 1979; 44: 77-86 ။ [PubMed]
Smith က CC ကို, ဂရင်း RW ။ noradrenergic innervation ကကမကထပြုခဲ့ CNS dopamine ဂီယာ။ J ကို neuroscience ။ 2012; 32: 6072-6080 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Smith က WB, Starck SR, Roberts သည် RW, Schuman EM ။ ဒေသခံပရိုတိန်းပေါင်းစပ်၏ Dopaminergic ဆွမျက်နှာပြင် GluR1 ၏စကားရပ်နှင့် hippocampal အာရုံခံအတွက် Synaptic ဂီယာပိုကောင်းစေပါတယ်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 765-779 ။ [PubMed]
Staubli ဦး, 1-5 Hz ဆွအတူ hippocampus အတွက်အလားအလာ Synaptic တုံ့ပြန်မှု၏ Lynch G. အတည်ငြိမ်စိတ်ကျရောဂါ။ ဦးနှောက် Res ။ 1990; 513: 113-118 ။ [PubMed]
Stramiello M က, Wagner JJ ။ LTP ၏ D1 / D5 အဲဒီ receptor-mediated တိုးမြှင့် PKA, src မိသားစု kinases နှင့် NR2B ပါဝင်သော NMDARs လိုအပ်သည်။ Neuropharmacology ။ 2008; 55: 871-877 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
ထူးဆန်းတဲ့ BA, Dolan RJ ။ oddball လှုံ့ဆော်မှုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် anterior hippocampal တုံ့ပြန်မှု။ Hippocampus ။ 2001; 11: 690-698 ။ [PubMed]
Straube T က, Korz V ကို, Frey Ju ။ ကြွက် dentate gyrus အတွက်အသစ်အဆန်း-တူးဖော်ရေးခြင်းဖြင့်ရေရှည်အလားအလာ Bidirectional မော်ဂျူ။ neuroscience လက်တ။ 2003; 344: 5-8 ။ [PubMed]
ဆူဇူကီး WA ။ အသစ်သောအမှတ်တရများ Making: အသစ်ကဝန်ထမ်းတွေရဲ့သင်ယူမှုအတွက် hippocampus ၏အခန်းကဏ္ဍကို။ အမ်းနယူးယော့ Acad သိပ္ပံ။ 2007; 1097: 1-11 ။ [PubMed]
Swanson LW ။ အဆိုပါ ventral tegmental ဧရိယာနှင့်ကပ်လျက်ဒေသစီမံကိန်း: တစ်ပေါင်းချောင်း retrograde tracer နှင့်ကြွက်များတွင်နဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ ဦးနှောက် Res Bull ။ 1982; 9: 321-353 ။ [PubMed]
Swanson LW, Hartman ကယ်။ ဗဟို adrenergic စနစ်။ ဆဲလ်အသေကောင်နှင့်တစ်ဦးအမှတ်အသားအဖြစ် dopamine-beta-hydroxylase အသုံးချဖို့ကြွက်မှာသူတို့ရဲ့ efferent ဆက်သွယ်မှု၏တည်နေရာတစ်ခုနဲ့ Immunofluorescence လေ့လာမှု။ J ကို comp Neurol ။ 1975; 163: 467-505 ။ [PubMed]
Swanson-ပန်းခြံ JL, Coussens CM, Mason ဆို-က Parker SE, Raymond CR, Hargreaves EL, Dragunow M က, Cohen ကို AS, အာဗြဟံ WC ။ တစ်ဦးက dopamine D1 / D5 အဲဒီ receptor ၏ hippocampus အတွင်းနှစ်ဆ dissociation နှင့်ရေရှည်အလားအလာများ၏ဇွဲမှ beta ကို-adrenergic အဲဒီ receptor ပံ့ပိုးမှုများကို။ neuroscience ။ 1999; 92: 485-497 ။ [PubMed]
Tiberi M က, Jarvie KR, Silvia က C, Falardeau P ကို, Gingrich ဂျာ Godinot N ကို, ဘာထရန်, L, ယန်-Feng တို့ TL, Fremeau RT ကို, Jr က caron MG ။ ကိုယ်ပွား, မော်လီကျူးစရိုက်လက္ခဏာတွေ, တစ်စက္ကန့် D1 dopamine အဲဒီ receptor မျိုးကွဲကုဒ်သွင်းနေတဲ့မျိုးဗီဇ၏မျိုးရိုးဗီဇကိုတာဝန်ကျတဲ့နေရာ: အ D1A အဲဒီ receptor နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ differential ကိုစကားရပ်ပုံစံ။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 1991; 88: 7491-7495 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Tran AH, Uwano T က, Kimura T က, ဟောရိအီး, Katsuki M က, Nishijo H ကို, Ono တီ Dopamine D1 အဲဒီ receptor Spatial အသစ်အဆန်းမှ hippocampal ကိုယ်စားပြုမှု plasticity modulates ။ J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 13390-13400 ။ [PubMed]
Tulving E ကို, မှတ်ဉာဏ် encoding ကများနှင့်ပြန်လည်ရယူခြင်း၏ပေလေ့လာမှုများအတွက် Markowitsch HJ, Craik FE, Habib R ကို, Houle အက်စ်ပစ္စည်းအသစ်အဆန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်း Active ။ Cereb Cortex ။ 1996; 6: 71-79 ။ [PubMed]
Undieh AS ။ အဲဒီ receptor activation -like dopamine: D (1) ကသွေးဆောင်အချက်ပြ၏ဆေးဝါးဗေဒ။ Pharmacol Ther ။ 2010; 128: 37-60 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Ungless MA ။ Dopamine: အအဓိကပြဿနာ။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2004; 27: 702-706 ။ [PubMed]
Vallone: ​​D, Picetti R ကို, dopamine receptors ၏ Borrelli အီးဖွဲ့စည်းပုံနှင့် function ကို။ neuroscience Biobehav ဗျာ 2000; 24: 125-132 ။ [PubMed]
Vankov တစ်ဦးက, Hervé-Minvielle တစ်ဦးက, Sara SJ ။ အသစ်အဆန်းနှင့်လွတ်လပ်စွာစူးစမ်းကြွက်၏ locus coeruleus အာရုံခံ၎င်း၏လျင်မြန်လေ့တုံ့ပြန်။ EUR J ကို neuroscience ။ 1995; 7: 1180-1187 ။ [PubMed]
Varela ဂျာ Hirsch က SJ, ချပ်မန်းက D, Leverich LS, ဂရင်း RW ။ Synaptic NMDA အဲဒီ receptor ရေစီးကြောင်း၏ D1 / D5 မော်ဂျူ။ J ကို neuroscience ။ 2009; 29: 3109-3119 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Villers တစ်ဦးက, Godaux အီး, L-LTP ၏ Ris အယ်လ် Latephase Synaptic ဖမ်းယူခြင်းဖြင့်ပြောင်းရွှေ့ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအထီးကျန် CA1 dendrites အတွက်ရူးနှမ်း။ Neuroreport ။ 2010; 21: 210-215 ။ [PubMed]
Vinogradova OS ကို။ နှိုင်းယှဉ်အဖြစ် Hippocampus: သတင်းအချက်အလက်ရွေးချယ်ရေးနှင့်မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်နှစ်ခု input ကိုနှင့် hippocampus နှစ်ခု output ကိုစနစ်များအခန်းကဏ္ဍ။ Hippocampus ။ 2001; 11: 578-598 ။ [PubMed]
Wagner JJ, Alger BE ။ GABAergic နှင့်ကြွက် hippocampus အတွက် homosynaptic, LTD နှင့် depotentiation အပေါ်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးမှု။ J ကို neuroscience ။ 1995; 15: 1577-1586 ။ [PubMed]
ဝမ် SH, Redondo RL, မောရစ် RG ။ ရေရှည်အလားအလာများနှင့်နေ့စဉ် Spatial မှတ်ဉာဏ်၏ဇွဲမှ Synaptic မှတ်သားခြင်းနှင့်ဖမ်းယူ၏ဆက်စပ်မှု။ proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2010; 107: 19537-19542 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Weiss T က, Veh RW, Heinemann U. Dopamine ကြွက် hippocampus အတွက် cholinergic oscillatory ကွန်ရက်လှုပ်ရှားမှု depresses ။ EUR J ကို neuroscience ။ 2003; 18: 2573-2580 ။ [PubMed]
Whitlock JR, Heynen AJ, Shuler MG, ထမ်းရွက် MF ။ သင်ယူခြင်းဟာ hippocampus အတွက်ရေရှည်အလားအလာဖြစ်ပေါ်သည်။ သိပ္ပံ။ 2006; 313: 1093-1097 ။ [PubMed]
Wittmann ဘီစီ, Schott BH, Guderian S က, Frey Ju, Heinz HJ, dopaminergic midbrain ၏Düzelအီးဆုကြေး-ဆက်စပ် FMRI activation တိုးမြှင် hippocampus-မှီခိုရေရှည်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ အာရုံခံဆဲလျ။ 2005; 45: 459-467 ။ [PubMed]
Xing B, ဟောင်ကောင် H ကို, Meng က X, ဝေစင်ကာပူဒေါ်လာ, Xu M ကလီ SB ။ Dopamine D1 သော်လည်းမ D3 အဲဒီ receptor အဆိုပါ hippocampus အတွက် Spatial သင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်အချက်ပြဘို့အရေးကြီးသည်။ neuroscience ။ 2010; 169: 1511-1519 ။ [PubMed]
Yanagihashi R ကို, အဖောက်ထားလမ်းကြောင်းကိုကြွက်များ၏ tetanic ဆွခြင်းဖြင့် hippocampal လယ်ကွင်းအလားအလာများ၏လူဦးရေမြင့်တက်အစိတ်အပိုင်းများ၏ရေရှည်အလားအလာအပေါ် Ishikawa တီလေ့လာရေး: တစ် dopamine agonist ၏ဆိုးကျိုးများ, SKF-38393 ။ ဦးနှောက် Res ။ 1992; 579: 79-86 ။ [PubMed]
ယဉ်နာရီ, Ostlund SB, Balleine BW ။ ဆုလာဘ်-guided နျူကလီးယပ်အတွက် dopamine ကျော်လွန်သင်ယူခြင်း accumbens: cortico-Basal ganglia ကွန်ရက်များ၏သမာဓိလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ EUR J ကို neuroscience ။ 2008; 28: 1437-1448 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]